ဆေးပေါ့လိပ်လုပ်ငန်းနှင့်တူသော ဘာသာရေးလုပ်ငန်း….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » ဆေးပေါ့လိပ်လုပ်ငန်းနှင့်တူသော ဘာသာရေးလုပ်ငန်း…..
Posted by Ko out of... on Sep 23, 2012 in Think Tank | 114 comments
အတိအကျကို ကျွန်တော်အနေနဲ့ မဖေါ်ပြနိုင်ပေမဲ့
ဆေးလိပ်ကိုလူတွေ သုံးစွဲပေမဲ့ ဆေးလိပ်ကြောင့် ရောဂါအမျိုးမျိုးရနေကြတာကို
အရင်မိဘဘိုးဘွားကလူတွေသိပ် သတိထားကြပုံမပေါ်ဘူး……အခုတော့ ဆေးလိပ်ကြောင့်
ကိုယ့်ဆေးလိပ်ကို..ကိုယ်ကြိုက်လို့ ကိုယ်သောက်တာ မှန်ပေမဲ့
ရောဂါရစေတယ်ဆိုတာ သိလာကြလို့ဘဲ ….
မသောက်ဖို့ အမျိုးမျိုး ပညာပေးလုပ်ငန်း လုပ်ကြတာတွေ… အခွန်ဆိုင်ရာဥပဒေ
တွေမှာလည်း တိုးမြှင့်ကောက်ခံတာတို့…စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး
ဆေးလိပ်ဟာ လူတွေရဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ စား၊ ၀တ်၊ နေရေးတွေမှာ
ဘာတခုမှ အထောက်အကူ မပေးတာ သတိထားမိကြမှာပါ..
အရိုးစွဲလုပ်လာတဲ့ မိဘ လုပ်ငန်းဆိုပေမဲ့….ဒါဟာ လူသားတွေကို
ရဲရဲ စွန့်ဖို လိုပါတယ်..ဒါမှ နောင်လာမည့် သားသမီး မျိုးဆက်တွေ…ရောဂါဘယက
ကင်းဝေးပြီး ကျန်းမာတဲ့ လူလေးတွေဖြစ်ပြီး..မိမိရဲ့ အကျိုး၊ လူသားအများတွေရဲ့ အကျိုးကို သယ်ပိုးနိုင်ကြမှာပေါ့….
သို့သော်လည်း…လူတွေဟာ မကောင်းမှန်းတော့သိ သလိုလိုနဲ့…စွန့်လွတ်ဖို့
ပြောချင်တာယနေ့ဘာသာရေးလောကမှာလည်း…တရားအားထုတ်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ဖျက်စီးနေတာ မသိဘဲဖြစ်နေကြတယ်..
– တရားကို ဝေဒနာကျော်အောင်ဆိုပြီး နာရီပေါင်းများစွာထိုင်တာ
ဟာဝေဒနာကိုကျော်တာ မဟုတ်ဘဲ…ကိုယ်ခန္ဒာမှာ အကြောတွေကို
ထုံထိုင်းစေ၊အောက်စီဂျင်နဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် အ၀င်အထွက်မမျှဘဲ ၀င်လေကရှည်(အောက်စီဂျင်များ) ထွက်လေကတို(ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နည်း) စသည့်ဖြင့်သွေးလည်ပတ်မှုလည်း မမျှမတဖြစ်ကာ…နောက်ပိုင်း
– အရွှယ်ကောင်းတုံးအလုပ်အကိုင်စီးပွားရေးလုပ်ရမည့်အစား.. သားသမီးကို ပစ်ပြီးတရားထိုင်ဖို့ သီးခြားအချိန်ပေးရတာတွေဟာ.. တာဝန်ဝတ္တရားလစ်ဟင်းမှု တခုဖြစ်ပြီး..လူ့လောက မတည်ငြိမ်ဖို့ ရောဂါရဲ့ အစဘဲ…
– သူမရှိ၊ ငါမရှိ၊ ယောကျာင်္းမိန်းမ ဆိုတာမရှိ၊ လုံးရပ်သဏ္ဍာန်ပုံ
ဟန်နိမိတ်ဆိုတာ မတွေ့ရတာ စတာတွေဟာ..လူသားတွေရဲ့ ဦးနှောက်မှတ်ဥာဏ်တွေကို
– သူမရှိ၊ ငါမရှိ၊ ယောကျာင်္းမိန်းမ ဆိုတာမရှိလုပ်တော့…အဲဒီလိုလူမျိုးဟာ
လောကရဲ့ အပြင်ဘက် ရောက်သလိုခံစားရတော့…ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတယ်..
-ငယ်ငယ်တုံးက စာသင်ကျောင်းမှာ…ဆရာ/မတွေက…အမှတ် သညာတွေကိုတည့်
ပြန်ဖျက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့..ဒါလည်းလူကို ဖျက်စီးခြင်း တမျိုးဘဲ…
– ဆေးလိပ် လုပ်ငန်းဟာ…လူတွေရဲ့ စား၊၀တ်၊ နေရေးတွေမှာ..ဘာတခုမှာ အထောက်အကူ မပြုသလို…လူတွေရဲ့ လက်တွေ့ဘ၀လုပ်ငန်းမှာ ဘာတခုမှ မယ်မယ်ရရအသုံးချလို့မရတာဟာ…လူ့လောကကို ဖျက်စီးတာဘဲ…
– အခုလည်း ကိုယ်တရားထိုင်တာ ဘယ်သူကိုများ ထိခိုက်လည်းလို့မေးရင်
ဆေးလိပ်သောက် သလိုဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်းဖျက်စီးသလို လောကပတ်ဝန်းကျင်ကို
အရင်တုံးက ဆေးလိပ်ကြောင့် လူတွေဘေးဥပါဒ်ဖြစ်တာ သိပ်မသိပေမဲ့..အခုတော့
ထို့အတူ..တရားရိပ်သာတွေမှာ…အသိမဲ့ အရှိမဲ့ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေကြတာ အကျိုး
မရှိဘူး ဆိုတာလူတွေ တော်တော်သိလာကြပြီ..
နိုင်ကြသလို…..ဘာသာတရား မရှိရင်ဘဲ မနေတတ်ကြဘူးဖြစ်နေကြတယ်..
ထို့အတူ တရားထိုင်တာ ထုံကျည်ကိုက်ခဲမယ်၊ ပင်ပန်းမယ်…ဒါကိုလည်းသိနေတယ်..သို့သော်ဒီ formula အဟောင်းအတိုင်းဘဲ ဆက်လက်ပြီးပုံသေ ထပ်ခါထပ်ခါ လေ့ကျင့်နေကြတယ်..ဒါဘာကြောင့်လဲ?…
ကောင်းတဲ့ အမွေတွေကို ဆက်ခံရန်သင့်သော်ပေမဲ့…ဒီလို လူတွေကို
ရောဂါအမျိုးမျိုး..ဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးနေတဲ့ မိဘရိုးရာ ဆေးပေါလိပ်လုပ်ငန်းနဲ့တူတဲ့ ..ယနေ့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းကို….ဆက်လက်အမွှေဆက်ခံသင့် မသင့် ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ကြပါကုန်လော?….
ကျုပ်ကလဲ သူကြီးအော်လို့ ဒီမှာ ဒီမှာ ကိုယ်တိုင်ရေးစာတွေ့ပြီ ပြောလို့ ဝင်ပြီးဆွေးနွေးကြည့်တာ အလကား အချိန်ကုန်တာပဲ။ ပါဠိတွေကတော့ ရွတ်လိုက်တာ ပြောမနေနဲ့။ အဲဒါတွေ မပြောခင် ခင်ဗျားလေ့လာနေတဲ့ ဝါဒကို ခင်ဗျားလက်ခံသလား လက်မခံသလားလို့ မေးလိုက်တာ အာစေးအထည့်ခံရသလို ဖြစ်ပြီး ပြန်ကိုမပြောနိုင်တော့ဘူး။ ကိုယ်ယုံကြည်တာတောင် ယုံကြည်ပါတယ်လို့ မပြောရဲမှတော့ ကျန်တာတွေ ပြောလို့ကော ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ။ သူကြီးရဲ့ လစ်ဘရယ်ဝါဒသမားတွေလဲ အလကားပဲ။
နောက်ပြီး ရေးတဲ့ကွန်မန့်ကလဲ ရှုပ်နေတာပဲ။ ကျနော်က ဘာသာတရားမရှိရင် လူတွေ ရိုင်းမသွားပါဘူးဆိုတာ ဘယ်လို စဉ်းစားပြီး ရလာတာလဲလို့ မေးတာကို ဥပါဒါနခန္ဓာရော အနုပါဒါနခန္ဓာတွေရော မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတွေရော အမယ်လေး ပါဠိတွေ ထည့်လိုက်တာ နဂိုက ရှင်းနေတာ ရှုပ်သွားလို့ မနည်းဖတ်ယူရတယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးကွန်မန့်ကိုသာ ဖတ်ကြည့်ပါဗျာ။ အမှန်တော့ တမင်မျက်စိ ရှုပ်အောင် ထည့်ထားတာပါ။
အဲဒါနဲ့ ကဲ ဟုတ်ပါပြီ ခင်ဗျားလေ့လာနေတဲ့ မိုးပြာဆရာတော်ရဲ့ တရားကို ခင်ဗျား ယုံသလား မယုံဘူးလားလို့ မေးလိုက်တာ တခါတည်း စကားမေးတောင် မရတော့ဘူး။ သူကြီး ပြောသလို သမိုင်းကျန်ရစ်ပါပြီ။
ကျုပ်ကြားဖူးတာတော့ သူတို့ဆရာ ဦးညာနက အတွေးအခေါ်ကို စိန်တောင် ခေါ်သေးဆိုပဲ။ ဒီအတိုင်း ဆိုရင် ဟုတ်ကော ဟုတ်ရဲ့လားမသိ။ အမှန်တော့ ကျနော်က ဦးညာနက စိန်ခေါ်တာကို ဘယ်သူမှ မဆွေးနွေးနိုင်ဘူး ပြောလို့ တော်တော်ကို အံ့သြနေတာ။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် ဦးညာနက လူတွေ နားမလည်အောင် ပါဠိတွေ ကွိကွိနဲ့ အော်ပြီး လှည့်ပတ်ပြောလို့ လူတွေက ဘာတွေပြောနေတာလဲ ဆိုပြီး ကြောင်ကြည့်နေတာကို သူ့တပည့်တွေက သတင်းလျှောက်လွှင့်တာနဲ့ တူပါတယ်။
ကျုပ်က ko ko thant ဆိုသူလည်း မိုးပြာဝါဒီပဲလို့ ထင်တယ်။ ကျုပ်ရဲ့ အောက်ကကွန်မန့်က သူ့ကို ပြောတာပါ။
ကျုပ်အခု ပင်ပန်းနေပြီ။ အိပ်လိုက်အုံးမယ်။ နောက်တနေ့ကျမှ ပြန်လာခဲ့မယ်။ ကျုပ် kthwinzayamyo ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မိုးပြာဝါဒီလို့ ပြောတဲ့လူကို သူယုံကြည်တာကို မေးထားခဲ့တယ်။ ဖြေရော ဖြေရဲသေးရဲ့လား မသိဘူး။ ခင်ဗျားတို့လဲ ကွန့်မန့်လေး ဖတ်ကြည့်ပါအုံး။
ဟူး သူကြီးရဲ့ လစ်ဘရယ်ဝါဒီ မိုးပြာဆရာတွေနဲ့ ဆွေးနွေးရတာလဲ မြင်းသေကောင်ကို ကြိုးနဲ့တုပ်ပြီး ရိုက်နေရသလိုပဲ။ မောလိုက်တာ။
ဘာသာရေး … နိုင်ငံရေးကို ၀င်ရောက်ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး … ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ကိုယ်တိုင် သေသေချာချာနားမလည်လို့ပါ ….
ကျွန်မရဲ့ခံယူချက်နဲ့ပြောပြရရင် တရားထိုင်သူတွေက ဆေးလိပ်သောက်သူတွေလို နောက်ပိုင်းရောဂါဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး … တရားထိုင်တယ်ဆိုတာ စကားအနေနဲ့ပြောတာပါ … တစ်ခါတစ်လေ စင်္ကြန်လျှောက်ရတဲ့အခါတွေလည်းရှိပါတယ် … နှလုံးရောဂါရနေသူတွေ ကင်ဆာရောဂါခံစားနေကြရတဲ့ သူတွေဟာ တရားရှုမှတ်ပွားများပြီး ရောဂါဝေဒနာတွေသက်သာသွားသလို ပျောက်ကင်းသွားကြတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ် …. ဒီရောဂါတွေဟာ စိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်လို့ စိတ်နဲ့ကုတာပိုထိရောက်ပါတယ် …..
တရားထိုင်တရားမှတ်တယ်ဆိုတာ တစ်ခြားလူတွေခံယူချက်ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်မမသိပါဘူး … ကျွန်မအတွက်တော့ အလွန်စိတ်ကိုငြိမ်းအေးဆေးပါတယ် … တစ်နေကုန် မိုးလင်းကနေမိုးချုပ် မြန်မာပြည်လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျင်လည်နေထိုင်နေရတာ ဒေါသမောဟတွေ လောင်မြိုက်နေချိန်မှာ ညဘက် ဘုရားရှိခိုးတရားလေးမှတ် လိုက်ရင် တစ်နေကုန် လောင်မြိုက်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေအေးချမ်းသွားပြီး မျက်နှာပါပြန်လည်ကြည်လင်လာတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ် …
နောက်တစ်ချက်က တရားထိုင်တရားမှတ်တာ သေခါနီးဝေဒနာတွေကို ကျော်လွှားနိုင်အောင် …. လောကဓံတရားကို ကြံ့ကြံ့ခံ နိုင်အောင် စိတ်ဓာတ်ကို အေးချမ်းအောင် လေ့ကျင့်သင်ယူတာပါ …. တရားထိုင်တရားမှတ်တဲ့ လူတွေဆိုးကျိုးရစေတယ်ဆိုရင် ကျွန်မကြားဖူးတာလေးပြောပြပါမယ် … ဘုန်းဘုန်းတပါးက ဘာရောဂါဝေဒနာမှ မရှိပါပဲ … သူ့တပည့် ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို စင်္ကြန်လျှောက်ရင်းမေးပါတယ် …. တပည့်ရဟန်းတို့ အသင်တို့ ဘုန်းကြီးတွေပျံလွန်တာ ဘယ်လိုပုံမျိုးတွေမြင်ဖူးပါသလဲမေးပါတယ် … တစ်ချို့က ထိုင်လျှက် လဲလျှက် အမျိုးမျိုးဖြေကြပါတယ် … စင်္ကြန်လျှောက်ရင် ပျံလွန်သွားတာမြင်ဖူးသလားလို့မေးပါတယ် … ဘုန်းဘုန်းတွေကမမြင်ဖူးပါဘူးလို့ ပြန်လည်လျှောက်တင်ပါတယ် … ဒါနဲ့ ဘုန်းဘုန်းလည်း စင်္ကြန်လျှောက်ရင် ဘာဝေဒနာမှ မခံစားရပဲ ပျံလွန်ခဲ့တယ် …. တရားဖက်ထားလို့ အသေကောင်းခဲ့တာပါ …
မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးက ပျံလွန်ခါနီးမှာ ဝေဒနာကို အလူးအလဲခံစားခဲ့ရပါတယ်… ဒါပေမယ့် ဘုန်းဘုန်းမှာ တရားနှလုံးရှိတဲ့အတွက် ဝေဒနာကို မညည်းငြူပဲ ပျံလွန်တော်မူခဲ့ပါတယ် ….
ကျန်းမာရေး ကောင်းချိန်မှာ ထိုင်ပေမယ့် ကျန်းမာရေးမကောင်းချိန်မှာ တရားဘာဝနာကျင့်ကြံသူတွေက ဝေဒနာတွေကို တရားနှလုံးသွင်း ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် …. ဒါကြောင့် တရားထိုင်တာကို ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးနဲ့မနှိုင်းယှဉ်သင့်ပါဘူး …
ဒီဆိုဒ်မှာ ရေးနေကြသူတွေမှာ လူငယ်တွေလည်းပါပါတယ် … ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး အယူမှားသွားနိုင်ပါတယ် …
မမေဖလားဝါးတင်တဲ့ ပသီမောင်နှမပို့စ်ထဲကလို ကိုယ်တိုင်မယုံရင် မစော်ကားဖို့လိုပါတယ် …. အခုကျွန်မရေးတဲ့ ကော်မန့်တွေက ကျွန်မဦးနှောက်ကျွန်မအသိ ကျွန်မလက်ခံထားတဲ့ အယူအဆတွေပါ စာပေတွေလေ့လာလိုက်စားပြီး သူများပြောလို့လိုက်လုပ်ခဲ့တာတွေမဟုတ်ပါဘူး …. မှားတာပါရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပါ ….. အကြောင်းတရားမှန်ဖို့ထက် ရင်ထဲဖော်ပြချင်တာကို ရင်ဖွင့်တာပါ ……….
ကျုပ်ပြောချင်တာက Ko Ko Thant ဆိုတဲ့လူပါ။
ကာယကံရှင် ပြောတာပဲ ကြားချင်ပါတယ်။ ဆိုတဲ့ ကိုစံလှကြီး ခင်ဗျာ
ဒီတော့ မိုးပြာဂိုဏ်းက ဂေါတမဗုဒ္ဓလို့ အမည်ရတဲ့ မြတ်စွာဘုရားကို ကြည်ညိုသူ ယုံကြည်သူတွေလား ?။ သူရဲ့လမ်းစဉ်ကို ယုံကြည်သူတွေလား ?။ လို့ မေးထားတော့
ကျွန်တော်တိုက မြတ်စွာဘုရားကို ကြည်ညိုသူ ယုံကြည်သူတွေ ပါ။သူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ကို ယုံကြည် ပါတယ်၊
ဒါပေမယ့် အဌကထာဆရာတွေ ဖွင့်ဆိုတဲ့ အတိုင်းတော့လည်း မယုံကြည်ဘူး ပေါ့၊
ကဲ ဟုတ်ပါပြီ ကို kthwinzayarmyo ရေ
ကျုပ်ကလဲ အဲဒီလို ကိုယ်ယုံကြည်တာလောက် ကိုတော့ ရဲ့ရဲ့ဝံ့ဝံ့ပြောရဲတဲ့ လူမျိုးမှ သဘောကျတာ။ အမှန်တော့ ကျုပ်က ဆောင်းပါးရှင်ကို ဆွေးနွေးဖို့ ခေါ်တာပါ။ သူသိပ်သွေးကြောင်နေလို့ ဒီမေးခွန်းကို ခင်ဗျားက မိုးပြာဂိုဏ်းကိုယ်စား ဖြေပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။ ဒီမေးခွန်းက လောလောဆယ် ဆွေးနွေးဖို့တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ခင်ဗျားတို့ ပြောရဲသလားလို့ သိချင်လို့ပါ။ ကဲ ကျန်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေလည်း အားလုံးအမြင်ပါနော်။ နောက်ပိုင်းတော့လည်း ဆွေးနွေးချင် ဆွေးနွေးပါမယ်။ ကျန်မိုးပြာများက ဒီ kthwinzayarmyo ဆိုတဲ့လူ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး ကျုပ်တို့က ဗုဒ္ဓကို ယုံကြည်သူ ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ကို ယုံကြည်တာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင် ကန့်ကွက်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့ပြောရတာလဲ ဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့က ခုတမျိုး တော်တော်ကြာ တမျိုးဖြစ်တတ်လို့ပါ။ မိုးပြာဝါဒီတွေက ဘုရားရှင်ဆိုတာ ပါးစပ်ကကို မချပါဘူး။
ကို kthwinzayarmyo ရေ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးရှင်က ဒီလို ရေးသွားပါတယ်။ “အရွယ်ကောင်းတုံး အလုပ်အကိုင် စီးပွားရေးလုပ်ရမယ့်အစား သားသမီးကိုပစ်ပြီး တရားထိုင်ဖို့ သီးခြားအချိန်ပေးရတာတွေဟာ တာဝန်လစ်ဟင်းမှုတခုဖြစ်ပြီး လူ့လောက မတည်ငြိမ်ဖို့ ရောဂါရဲ့ အစပဲ” လို့ရေးသွားပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျနော်က မေးလို့ သူဖြေတဲ့ သူ့ရဲ့ပထမဆုံး ကွန်မန့်ထဲမှာလဲ လှူတာတန်းတာတွေ ကုသိုလ်ရေး လုပ်တာတွေဟာ ဝတ္တရား ပျက်ကွက်မှုလို့ ရေးသွားပါတယ်။ အဲဒါအပေါ် ခင်ဗျားရဲ့ အမြင်က ဘယ်လို ရှိပါသလဲ ?။ ဆိုလိုတာက သဘောတူပါသလား ?။ သဘောမတူဘူးလား ?။ မိုးပြာဂိုဏ်းကရော ဒီလို အမြင်ရှိပါသလား။
ဘာလို့ ဒါကို မေးရတာလဲဆိုတော့ ဒီအချက်က ဒီဆောင်းပါးရဲ့ အသက်ဖြစ်ပြီး အဓိကအချက်ပါ။ သူက မထွက်လာတဲ့အတွက် ဝင်ဆွေးနွေးတဲ့ ခင်ဗျားကို မေးရတာပါ။ ခင်ဗျားပို့စ် မဟုတ်လို့ပါ။ ကျနော်က ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးမယ့် ဘက်ကပါ။ တကယ်လို့ ခင်ဗျားက ဒီအချက်ကို သဘောမတူဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားနဲ့ ကျုပ်ဘာမှ ထက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ မရှိတော့ပါဘူး။ နောက်တော့ ဆက်ကြတာပေါ့။ တကယ်လို့ ဆောင်းပါးရှင်နဲ့ သဘောချင်း တူတယ်ဆိုရင်တော့ ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးပါမယ်။
နောက်ပြီး ကျုပ်ဖတ်ဖူးသလောက် မိုးပြာဂိုဏ်းက တရားရှာ ကုသိုလ်ရှာတဲ့ အလုပ်တွေ အားလုံးဟာ လူမှုတာဝန်ပျက်တယ်လို့ သဘောရှိတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ ဟုတ် မဟုတ် ဖြေပေးပါ။ တတ်နိုင်သမျှ မကျဉ်းမကျယ်လေး ဖြေပေးပါ။ ပါဠိတွေ အများကြီးသုံးလို့ မိတ်ဆွေတွေရော ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ရော နားမလည်တာတွေ ပါလာရင် အဲဒီစကားလုံးတွေကို ပြောသူကိုပဲ ပြန်ရှင်းပြခိုင်းပါ့မယ်။ မသုံးလို့ မဖြစ်တာတော့ သုံးပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါက အတွေးအခေါ်ပါ။ ကျနော်လဲ မသုံးမဖြစ်တာလောက်ပဲ သုံးမယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်။
Religion (from O.Fr. religion “religious community,” from L. religionem (nom. religio) “respect for what is sacred, reverence for the gods,” “obligation, the bond between man and the gods
Wikipedia ထဲက ကူးထားတာပါ၊ကမ္ဘာက နားလည်ထားတဲ့ ဘာသာတရား ရဲ့ အဓိပ္ပယ်လို့ ထင်တယ်
ကိုစံလှကြီးရဲ့ ဘာသာတရားမရှိရင် လူတွေ ရိုင်းမသွားပါဘူးဆိုတာ ဘယ်လို စဉ်းစားပြီး ရလာတာလဲလို့ မေးတာ ကို ဖြေကြည့်ချင်လို့
ဗုဒ္ဓ အဆုံးအမကို သာသနာလို့ ခေါ်ကြပါတယ် ၊ မျက်စိမှိတ် ယုံကြည်သက်ဝင် ကိုးကွယ်စရာ မလိုပါ
ဆန်းစစ်ဝေဘန်ပြီး သဘောပေါက်ရင် သဘောပေါက်တဲ့ အတိုင်း ကျင်သုံးနေထိုင်သွားတာ ဖြန့်ဝေတာကို
အကြောက်တရားတွေနဲ့ ကျင့်သုံးစေတဲ့( ရှေးရိုးစွဲ)ဘာသာတရား (မဝေဘန် မစိစစ်ဘဲကျင့်ကြသူတွေကို
လဲ ဘာသာတရားစာရင်းထဲ ထည့်လိုက်ပြီ) တွေ မရှိတော့ရင်လည်း လူတွေ ရိုင်းမသွားနိုင်ဘူးလို့
တွေးပါတယ်။ ဝေဘန်စိစစ်နိုင်မှတန်ကာကျတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဘာသာတရားတွေ ဆက်လက်ရှင်သန်
အဆုံးအမ(သာသနာ)တွေပဲ အရှည် တည်တံ့မှာပါ
ကို kthwinzayarmyo ရေ
ဒီအချက်ကတော့ အမှန်မှာ ဒီဆောင်းပါးရဲ့ အဓိကအချက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဆောင်းပါးရှင်က ဒီရက်ပိုင်းမှာ ရေးတဲ့ ကိုပါကြီးဆိုသူရဲ့ ဆောင်းပါးဘက်ကနေ ကာကွယ်ချင်လို့ ရေးထားတာပါ။ နောက်တော့ ကျနော့်အမြင်ကို ပြန်ရေးပါ့မယ်။ အားလုံး ဖတ်ရအောင်ပေါ့။ လောလောဆယ်တော့ မရေးသေးပါဘူး။ ကျနော်က နောက်ကအကြောင်းကို နောက်မှာတော့ မပြောဝံ့ပဲ ရှေ့မှာလာပြီး ပို့စ်ထပ်တင်ရင် ပြောရတာ စိတ်မပါပါဘူး။ အဲဒီ ကိုပါကြီးဆိုသူလဲ ko out of လိုပဲ ပို့စ်တင်ပြီးရင် လုံးဝ မဖြေရှင်းနိုင်ပါဘူး။
နောက်ပြီး ဒီ ko out of ဆိုတဲ့ စာရေးသူဟာ တော်တော်ကို ကလေးဆန်ပါတယ်။ အခုလဲ ဒီပို့စ်မှာတောင်မှ ဘာမှ မဖြေရဲပဲ နောက်ထပ်ပို့စ်အသစ် တင်ပြီး ပြောချင်ရာ ပြောနေပါတယ်။ အဲဒီလို အပြုအမူမျိုးကို ကျနော်က အရမ်း အရမ်း အရမ်းကို အထင်သေးပါတယ်။ တကယ့်ကို ကလေးအတွေးတွေပါ။ ကလေးအတွေးဆိုတာ လေးလေးဝါးဆိုတဲ့ သီချင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလူရဲ့ အပြုအမူကို ပြောတာပါ။
ကျနော်ကတော့ သူ့နောက်ပို့စ်ကို လိုက်ပြီး မဆွေးနွေးနိုင်ပါဘူး။ ဒီပို့စ်မှာပဲ စိမ်ပြေနပြေ ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ခင်ဗျားလူလဲ ခင်ဗျားတတ်နိုင်ရင် နည်းနည်းပြောထားပါအုံး။ ဘယ်လောက် ရယ်စရာကောင်းသလဲလို့။ မိုးပြာဆရာ ဦးဥာဏရဲ့ လင့်ခ်တွေပေးပါတယ်။ မိုးပြာဆရာတော် ဦးဥာဏရဲ့ ဆေးအကြောင်းကို သိချင်ရင် သူတတ်နိုင်သလောက် ဖြေမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်က ဒါဖြင့် ခင်ဗျားလေ့လာနေတဲ့ ဆေးကို ခင်ဗျား ယုံသလား မယုံသလားလို့ မေးလိုက်တာ အာစေးအထည့်ခံရသလို ဖြစ်ပြီး ပြန်ကိုမပြောတော့ပါဘူး။ ကျန်တဲ့လူတွေလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကျုပ်က ပြောတဲ့လူကိုယ်တိုင်က မယုံကြည်တဲ့ ကိစ္စကို သူပြောတာတွေ နားထောင်နေရင် ကျုပ်လောက်မိုက်တဲ့လူ ရှိပါတော့မလား။
ခင်ဗျားရဲ့ ဒီကွန်မန့်ကို နောက်တော့ ကျနော်ပြန်ရေးပါမယ်။
ဘာတဲ့ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် အ၀င်အထွက် မမျှဟုတ်စ … မမျှဘူးထင်ရင်မလုပ်နဲ့ပေါ့။ ရှင်းရှင်းလေး .. မျှလို့လုပ်တဲ့လူတွေလုပ်နေတာ .. အကောင်းကြီး … အဲ့လိုတာမမျှရရင် တစ်လတရားစခန်းတို့ဘာတို့ဝင်တဲ့လူတွေ အကုန်သေကုန်ရောပေါ့ … ကျုပ်တို့ကတော့ ပါဠိတွေဘာတွေမတတ်လို့ ပါဠိလိုမရှင်းတတ်ဘူး … ဒါပေမယ့် ဘုရားကတရားမရမချင်း မထတမ်းထိုင်နေရမယ်လို့မဟောခဲ့ပါဘူး … သင့်တင့်တဲ့အရိယာပုဒ်နဲ့ သတိကိုယ်နဲ့မကွာကပ်ထားဖို့ပြောတာပါ … ပြန်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါအုံး …
ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေဟာ လူ့လမ်းညွှန်မှုသဘာတရားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓလွန်တဲ့ နောက်ပိုင်းကျမှ တပည့်အသီးသီးက သူ့အမြင်၊ ကိုယ့်အမြင်တွေနဲ့ သိမ်းပိုက်လိုက်ကြပြီး ဂိုဏ်းဂဏတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။
ထိုကမှ ဆရာအစဉ်အဆက်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ယုံကြည်မှု ခိုင်မာအောင်လို့ ပြုလုပ်ကြရင်းနဲ့ပဲ ယုံကြည်မှုကို အခြေခံတဲ့ ဘာသာရေးပုံစံ ဖြစ်သွားရတယ်လို့ သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။
တကယ်ကတော့ ဗုဒ္ဓလမ်းညွှန်ဓမ္မတွေဟာ ယုံကြည်မှုကို အခြေခံရတဲ့ ဘာသာရေးတော့ မဖြစ်သင့်ပါ။
အသိပညာကို အခြေခံတဲ့ ပညာရပ်သာလျှင်ဖြစ်သင့်တာမို့ . . . ၊ ဗုဒ္ဓဓမ္မပညာလို့ ပြောရင်ပိုသင့်မလားလို့ တွေးမိပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဗုဒ္ဓရဲ့ လူ့လမ်းညွှန်းဓမ္မတွေကို ဘာသာရေးပုံစံကနေ စွဲထုတ်နိုင်ပြီး လူ့လမ်းညွှန်ပညာရပ်အခြေအနေရောက်ရင်တော့ Ko out of… ရေးတဲ့ ဆေးပေါ့လိပ်လုပ်ငန်းနှင့်တူသော ဘာသာရေးလုပ်ငန်း….. တွေဟာ ဗုဒ္ဓတရားတွေနဲ့ မဆိုင်ပဲ ဖြစ်သွားလ်ိမ့်မယ်လို့မြင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓတရားတွေကို ဘာသာရေးပုံစံ ဖော်ဆာင်နေသူများကြောင့် Ko out of…ရေးတဲ့ ဆေးပေါ့လိပ်လုပ်ငန်းနှင့်တူသွားသလိုဖြစ်နေရင်တော့ ဗုဒ္ဓတရားနဲ့ မဆိုင် ဖော်ဆောင်သူများ အချိုးမကျမှုနဲ့ သာဆိုင်ပါတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ကဲ ko out of ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ဆရာ
ခင်ဗျားက အခုမှ သက်ကယ်ချောင်းနဲ့ ခေါင်းလောင်းထိုးသလို အခုမှပဲ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို ခင်ဗျား ယုံကြည်သလား ကြည်ညိုသလား သူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ကို လိုက်နာသလားဆိုတဲ့ လွယ်လွယ်လေး မေးခွန်းကို အခုမှ ဖြေတော့တာကိုး။ ဟုတ်ပါပြီ ဟုတ်ပါပြီ။ ကျုပ်ကလဲ ခင်ဗျားနဲ့ပဲ ပြောချင်တာပါ။ ပို့စ်ပိုင်ရှင် မဟုတ်တဲ့ လူတွေနဲ့ မပြောချင်ပါဘူး။ ဖြေတော့လဲ ခင်ဗျားက older comments ထဲမှာ သွားဖြေတာကိုးဗျ။ မိတ်ဆွေတို့ သူ့ရဲ့ အဖြေက older comments ထဲမှာ reply လုပ်ထားတာပါ။ အခုမှ ဖြေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် kthwinzayarmyo ဆိုသူကို မေးတုန်းက သူပြန်မဖြေသေးပါဘူး။ ကျနော် သူ့ကို ရှုတ်ချပြီးတော့မှ သူက ချက်ချင်း ကောက်ဖြေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ သွားဖတ်ပါ။
မပူပါနဲ့ဗျာ။ ပန်းတွေ ရေချမ်းတွေကပ်ပြီး ခင်ဗျားတို့ကို မရှိခိုးခိုင်းပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ မလုပ်ဘူး လုပ်ရမှာ သေမလောက် ကြောက်တာလည်း ကျနော်သိပါတယ်။ ခင်ဗျား ယုံကြည်တယ် ကြည်ညိုတယ်ဆိုလည်း ပြီးတာပါပဲ။ ကျုပ်က ခင်ဗျား ဘယ်လောက် တာဝန်ယူစိတ် ရှိသလဲဆိုတာ သိချင်လို့ စမ်းကြည့်တာပါ။ ခင်ဗျား ဘယ်လောက်တောင် စဉ်းစားနေလို့ ဒီလောက်ရှင်းတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေဖို့ ၃ ရက်တောင် ကြာသွားရတာလဲ။ ကျုပ်က ခင်ဗျားကို မေးတာ ၂၃ရက် နေ့ကမေးတာကို အခု ၂၆ရက်နေ့မှ ဖြေတယ်ဆိုတော့ သိပ်တော့ မကြာဘူးပဲ။ မအားဘူး ပြောရအောင်လဲ နောက်ထပ် အသစ်တပုဒ်တောင် ရေးလိုက်သေးတယ်။
ကဲ ကျေးဇူးရှင် new comments တွေရှိတဲ့ နေရာကို ကြွတော်မူပါ။ ခင်ဗျားနဲ့ ဆွေးနွေးရအောင်။ ကို kthwinzayarmyo ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေ ဒီမှာ ခင်ဗျားလူ ပြန်ဖြေပါပြီ။ သူနဲ့ပဲ ဆက်ဆွေးနွေးပါ့မယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေ ပွဲကြည့်နေပါ။ mggwa ဆိုတဲ့လူ ခင်ဗျားပို့စ် မဟုတ်လို့ ခင်ဗျား အသာလေး ပါးစပ်ပိတ်နေပါ။ မိုးပြာတွေထဲမှာ ခင်ဗျားဟာ တော်တော် စိတ်ဓတ်အောက်တန်းကျတယ်။
ကဲ ko out of ကြွတော်မူပါ။ နောက်ဆို ဘာမှ ပြန်မပြောပဲ ၃ ရက်လောက် စဉ်းစားမနေပါနဲ့ဗျာ။ ကဲ အခုရော ခင်ဗျားက မိုးပြာဆရာရဲ့ ဆေးကို လေ့လာနေသူလား။ အဲဒီဆေးကို ယုံသလား မယုံဘူးလား။ ဒါလဲ ခင်ဗျားကို test လုပ်တာပါ။ သိပ်တော့ မစဉ်းစားပါနဲ့။ ခေါင်းက ဆံပင်တွေ ဖြူကုန်အုံးမယ်။
ပထမဆုံး တာဝန် မလစ်ဟင်းသင့်ကြောင်း ပြောရအောင်
ကျွန်တော့ အမြင်ကတော့ တာဝန်.၀တ္တရား တွေဟာ မလစ်ဟင်းအောင် စောင့်ထိန်းသင့်ပါတယ်။
မိသားစု ထဲမှာ၊ ရပ်ကွက်ထဲမှာ၊ စက်ရုံမှာ ၊လူ့အဖွဲအစည်းမှာ စသည်ဖြင့် ကိုယ့်ရပ်တည်မှုအလိုက်
တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ကိုယ်နိုင်သလောက် သားဘ၀ မှာ ရေခပ်ဖို့.စာကျက်ဖို့တာဝန်
အဖေ ဘ၀မှာ မကောင်းမြစ်တား.ကောင်းရာညွှန်လတ် .အတတ်သင်စေ စသည် တာဝန်
ဆရာဘ၀မှာ သင်ကြား.ပြသ. ဆုံးမဖို့ ဘေးရန်ဆီးကာဖို့တာဝန်
သာသနာ့ဝန်ထမ်းဘ၀မှာ တရားသင်.တရားကျင့် တရားဖြန့်ဝေဖို့တာဝန်
စက်ရုံ ၀န်ထမ်းမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ပြည့်မီဖို့ အရည်အသွေးကောင်းဖို့ တာဝန်
စသည်ဖြင့် ကိုယ်စီ ထမ်းရွက်ဖို့ ရှိပါတယ်။
အဖေလုပ်နေပြီး တရားသင်.တရားကျင့်တာဝန်လုပ်နေရင် မကောင်းမြစ်တား စသည့်
ဖခင်တာဝန် မကျေလို့ အဖွဲ့အစည်း(မိသားစု) ထိခိုက်ပါတယ်
တစ်ယောက်ယောက်က တာဝန်မကျေပွန်တာနဲ့ သူ့အဖွဲ့အစည်း (လူ့အဖွဲ့အစည်း .လူ့လောက) အထိခိုက်ခံရတော့တာပဲ ။ဒီတော့ တည်ငြိမ်မှု အားနည်းတာပေါ့။ဒါကြောင့်များ
ဆောင်းပါးရှင်က လူတွေ တရားထိုင်ဖို့ သီးခြားအချိန်ပေးရတာတွေဟာ တာဝန်လစ်ဟင်းမှုတခုဖြစ်ပြီး လူ့လောက မတည်ငြိမ်ဖို့ ရောဂါရဲ့ အစပဲ” လို့ရေးသွားတာလားလို့- – – – –
လှူတာတန်းတာတွေ ကုသိုလ်ရေး လုပ်တာတွေဟာ ဝတ္တရား ပျက်ကွက်မှု ဆိုတဲ့အချက်ပါ
ခံစားမှု နဲ့ ဘ၀ အကြောင်းပြောရအောင်
အဖေက သားကို မကောင်းမြစ်တား။ ကောင်းရာညွှန်လတ်မယ်။ အတတ်သင်စေမယ်
ဘာဖြစ်စေချင်လို့လဲ ? ဘ၀ ကောင်းစေချင်လို့
ဆရာဝန်ကြီးဘ၀.အင်ဂျင်နီယာကြီးဘ၀ ကောင်းမွန်တဲ့ဘ၀. အောင်မြင်တဲ့ဘ၀ ဖြစ်စေချင်လို့
သားအတွက် ခံစားမှုက ဘယ်လိုရှိမလဲ
လုပ်ချင်တာ မလုပ်ရတဲ့ ဒုက္ခ ၀တ္ထုစာအုပ်မဖတ်ရ၊ ကိုရီးယားကား မကြည့်ရတဲ့ စိတ်ဒုက္ခ
ခု တိုးတက်အောင် ကြိုးစားရင် သူများထက် ပိုပင်ပန်းမယ် ဒါပေမယ် ဘ၀တော့ ကောင်းပြီ
ခုစိတ်ခံစားမှုနောက်လိုက်ရင် (သောက်လေသောက်လေ ငတ်မပြေ)ဘ၀ကတော့ နစ်မွန်းပြီ
ဒါက ကာမဂုဏ်ထဲ နစ်နေတဲ့ အစွန်းတရားတစ်ပါး
ဒါက ခံစားမှု နဲ့ ဘ၀ အကြောင်း ကျွန်တော့အမြင်
တရားမသိပေမယ့် တရားထိုင်ရင် စိတ်အေးချမ်းတယ်.အပူအပင်တွေမေ့.
ဒါပေမယ့် လက်ရှိ စီးပွား.ကြီးပွား.လူမှု ပြသနာတွေ ပြေလည်မှာလား ထပ်ပြောကြည့်မယ်နော်
ဒါက ကာမ(ခေတ္တ ခဏ)လွတ်တဲ့ အစွန်းတရားတစ်ပါး
ဥပမာ တစ်ခု ပြောကြည့်မယ်
ဘုရားဖူး ကားတွေက လမ်းဘေးက ကလေးတွေကို မုန့်တွေ ပိုက်ဆံတွေ ပစ်ချ (လှူ)မယ်
အကျင့်ဖြစ်လာတော့ ကလေးတွေက ကားမျှော်တတ်လာပြီ. တဖြေးဖြေး တောင်းတတ်လာပြီ
တောင်းတတ်လာတဲ့ ကလေးဘ၀ ကို ဘယ်လိုခေါ်ကြမလဲ(သူတောင်းစားလေးပေါ့)
ဒါဆို ဘုရားဖူးကားတွေက ပစ်ချ (လှူ) လိုက်တာ (ပျော်ရွှင်စေတဲ့ခံစားမှုလား)(၊သူတောင်းစားဘ၀လား)
ဒါကြောင့်များ ရေရှည် ဘ၀ကိုမကြည့်တဲ့၊အမြင်မရှိတဲ့
လှူတာတန်းတာ ကုသိုလ်ရေး လုပ်တာတွေဟာ လူ့ဝတ္တရား ပျက်ကွက်မှု လို့ ပိုစ်တင်သူက ပြောတာလား။ လူတွေ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောတာလား———
ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်က ပို့စ်တင်သူကို ဒီလိုရေးသွားတာလားလို့ ဒီလိုပြောတာလားလို့ ဆိုပြီး မေးနေရတဲ့အတွက် ကျုပ်ခင်ဗျားကွန်မန့်ကို သီးခြားမဖြေတော့ပါဘူး။ မေးတာကတော့ ခင်ဗျားပို့စ် မဟုတ်လို့ သဘာဝကျပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်ပို့စ်တင်သူကိုပဲ ပြန်ဖြေပါ့မယ်။
အစိုးရပိုင်ပစ္စည်းကိုခိုးတာအပြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့ ရာဇ၀တ်မှုမကင်းတဲ့ ကြာကူလီပုဒ်မဖြစ်အောင်မြှောက်ပေးတဲ့ အယူဝါဒတွေ ကို မိုးပြာတရားထဲမှာ ကျုပ်တော့မတွေ့သေးဘူး nature ကိုတော့ ဖြေပြီးပြီ ငါသိသလို…….
အခုတော့ တော်တော့်ကို အမေးအမြန်ထူတဲ့ San Hla Gyi အလှည့် လာရော့လဟယ်။
San Hla Gyi မေးခဲ့တာ ဘာတွေလဲတော့ ငါမသိ၊ ဒါတော့ ပါလောက်တယ်ထင်၊
ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ မိုးပြာဆို ဒါပဲ စွပ်စွဲနေကြတာကများလှပါတကား၊
မိုးပြာမှာက ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်း ယူတာကိုပဲ ပြောတာပဲတွေ့တယ်ကွဲ့။
ဒါလဲ ဟုတ်တယ်လေ၊ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကို ယူသုံးနေရတာ ဘယ်သူ့ခွင့်တောင်းနေရမှာလဲကွဲ့။
မောင်ဂွတို့ ရပ်ကွက်ထဲက ရေကန်ထဲက ရေတွေ ဘယ်သူပိုင်သလဲ၊
မောင်ဂွတို့ ပြည်သူတွေပိုင်တာပေါ့ကွယ်။ အဲဒီပြည်သူပိုင်ရေတွေကို ခပ်ယူသုံးတာနဲ့ပဲ အကုသိုလ်ဖြစ်ရရင်တော့ မောင်ဂွတို့ တရပ်ကွက်လုံး သူခိုးတွေပဲလို့ ပြောရတော့မလိုဖြစ်နေတာပ။
ဒါဆို ဘယ်သူမှ ရေမခပ်နဲ့တော့နော့။
အေး ဒါပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရက အစိုးရပိုင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပစ္စည်ကိုတော့ ပစ္စည်းကိုတော့ အပ်တိုလေးတစ်ချောင်းတောင်သွားမယူလေနဲ့ကွဲ့၊
အစိုးပိုင် မသတ်မှတ်ထားလို့ကတော့ ရေကန်ထဲကရေတွေလဲ ခပ်လို့ရပါတယ်ကွဲ့၊ တောထဲက ထင်းတွေလဲ ခုတ်နေကြတာပါပဲကွဲ့၊ အဲ ကျွန်းပင်တော့ သွားမခုတ်လေနဲ့ကွယ်။ သူကျတော့ ထောင် ၇-နှစ်လို့ ကြားဖူးထားတယ်။ သူ့ ဒေါ်လာရတယ်ကွဲ့။
ဒါက ပြည်သူပိုင် ပစ္စည်းကို ကွဲပြားဖို့ပြောရတာနော့။
အလိုသူရင် ကာမေသု မမြောက် (ပြဿနာ) မရှိပါဘူးကွဲ့၊
ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ လင်ရော၊ မယားရော အလိုသူနေမှတော့ ဘယ်လိုလုပ် ပြဿနာဖြစ်နိုင်တော့မှာလဲနော့။
ဘုရားခေတ်က သောတာပန် သူဌေးသမီးတစ်ယောက်လေ။ ဥပုသ်စောင့်ချင်လို့ သူ့ယောက်ျားနဲ့ ပေါင်းဖို့ ပြည့်တန်ဆာမတစ်ဦးကို သဘောတူ ငှားပေးခဲ့တာ ကြားဖူးတယ်မို့လား၊
လင်ရော၊ မယားရော အလိုတူနေမှတော့ စဉ်းစာကြည့်ပေါ့နော့။
ဒီခေတ်ဆိုရင် အလိုသူလို့ အငှားကိုယ်ဝန်ဆောင်ပေးနေတာတို့၊ အလိုသူလို့ သုတ်ပိုးအလှူခံပြီး ကိုယ်ဝန်ရအောင်လုပ်နေတာတွေ နင်ကြားဖူးမှာပါဟယ်။
အဲလောက်ထိ စကားနက်ကို ချဲ့ကြည့် ပွားကြည့်တတ်ရတယ်ကွဲ့။
နင့်အခုဟာက စာရေးဆရာဦးအောင်သင်းပြောသလို သူက ကျနော့်ကို လက်သီးကြီးနဲ့ထိုးလို့ ကျနော်ကဓားလေးနဲ့ ပြန်ထိုးတာပါလို့ ပြောတဲ့သူလို မိုးပြာကို နင်တို့ မလိုသလို စွပ်စွဲထားတာ နာတောင်ကြောက်သလိုလို ဖြစ်လာတယ်။
ကြောက်ကြောက်နဲ့ လေ့လာတော့မှ နင်တို့ စာသေသေချာချာမဖတ်တတ်ပါလာလို့ သိရတော့တယ်ဟယ်။
နောက်ဆို စာတွေဖတ်ရင် အသေအချာ လိုရင်းရောက်အောင်ဖတ်ကြကွဲ့။
မနေနိုင်လို့ ကိုယ်လေ့လာထားတဲ့ အသိလေးပြောကြည့်တာနော့။
(nature နဲ့ San Hla Gyi ၂-ဦးစလုံး IQ က သိပ်ကွာပုံမရလို့ အဖြေတစ်မျိုးထဲပဲ ပေးလိုက်တယ်နော့၊ ကွန်မန့်အသစ်ထပ်ရေးရမှာ ပျင်းတာလဲ ပါပါတယ်လေ. . . . :D)
(သတ္တ၀ါမှန်သရွေ့ တရားတွေ့ ချမ်းမြေ့သာယာကြပါစေ၊
အစိုးရနဲ့ များပြည်သူ ပြဿနာ ဆူပူ ကင်းပါစေ၊
လင်နဲ့ မယား သံသယမပွား၊ ပြဿနာများ ကင်းကြစေ)
အလိုတူလို့ လိင်တူခြင်းခြင်း တူနယ်တဲ ရင် အာပတ်သင့်သလား
အားကိုးဘာဒယ် ကိုဒေါ်ရယ် :harr:
mggwa မင်းမိန်းမ , မရသေးရင် မင်းအမ မင်းညီမ
ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး တချက်လောက် ပြောလိုက်စမ်းပါဗျာ။ အဲဒီ mggwa ဆိုတဲ့လူက မိုးပြာထဲမှာ နည်းနည်း အဆင့်အတန်းနိမ့်တယ်။ သူပြောတဲ့ ငါးပါးသီလကလဲ ဒီဆောင်းပါးရဲ့ အဓိကအချက် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ မဆွေးနွေးသေးတာ မိတ်ဆွေတွေ အမြင်ပါ။ သူလဲ ဒါပဲ ပြောတတ်တယ်နဲ့ တူပါတယ်။ သူများက အိုင်ကျူနိမ့်တာ မဟုတ်ပဲ mggwa ကအိုင်ကျူ နိမ့်နေတာပါ။ ကျနော်က မေးခွန်းတွေမေးတာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ဒီမိုးပြာတွေက ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် မယူတတ်ပါဘူး။ သူတို့ ပြောတာ ယုတ္တိမရှိမှန်း သိရင်တောင် ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်မယူပဲ အဗ္ဗဒူလာဟူစိန်ခိုင် ဆိုသူရဲ့ facebook ကကူးယူဖော်ပြတာပါတို့ စာသင်သား ဦးဇင်းနှစ်ပါး ပြောနေတာ ကြားလို့ပါတို့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ လူတွေပြောတာကို နားနဲ့ဆတ်ဆတ် ကြားခဲ့တာပါတို့ ကိုဆာမိနဲ့ ကိုပေ ဆွေးနွေးတာကို ကြားလို့ပါတို့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအမြင် မဟုတ်ပါဘူးတို့ အရှက်မရှိပြောတတ်တာတွေကို စာဖတ်သူတွေ သတိထားမိမှာပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့ ယုံကြည်ချက်ကို စမ်းကြည့်တာပါ။ နာမည်ကို ယူသုံးမိတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါ ကိုဆာမိနဲ့ ကိုပေရေ။ တကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာပြောတာပါ။
စိတ်ပေါ်တိုင်း နီးရာ နဲ့ အလိုတူ သဘောတူ ဖောက်ပြား နေလို့ ကတော့ လူဆိုတာ တိရိစ္ဆာန် နဲ့ ဘာကွာ ပါ တော့ မလဲ ကိုမောင်ဂွ ရယ်။
ဘုရားခေတ်က သောတာပန် သူဌေးသမီး ဆိုတာက ဥပုဉ်သီလ စောင့်ချင်လွန်းလို့ သူ့မယား တာဝန်ကို မဖြည့်နိုင်လို့ ပါ။
ကိုယ့်မိန်းမ၊ ယောကျာင်္းနောက်ကွယ်မှာ သူများမိန်းမ၊ ယောကျာင်္း နဲ့ ဖောက်ပြား တာက တော့ ဘာသာရေး ကို ထည့်မပြော နဲ့ ဦး။
ကိုယ်ကျင့်တရား အောက်တန်းကျ တာပါ။
တကယ်တော့ လူတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား တွေ ကို ပိုမို မြင့်မားအောင် ဘာသာရေးက ထိန်းပေးရမှာပါ။
မဟုတ်ဘဲ နိမ့်ကျစေတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးတွေ ဖြစ်လာစေမယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီ အတွေးအခေါ်တွေဟာ တန်ဖိုးရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူများ ကို တရားဟောပြမဲ့သူဟာ
လူတစ်စု ကတင် ကြည်ညိုတာ မဟုတ်ဘဲ အများ က လဲ ကြည်ညို လေးစား မှု ရှိ ရပါမယ်။
ကိုယ်ကျင့်တရား ဖြူစင် မှန်ကန် သူတစ်ယောက် ကို အများ က ဘယ်နည်းနဲ့မှ အထင်မမှားနိုင်ပါဘူး။
မဟုတ် ရင်တော့ အဲဒီ ဟောပြသူရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားမှာ ဖြစ်စေ၊ သူ့ဟောပြောတဲ့ အကြောင်းမှာ ဖြစ်စေ တစ်ခုခု လွဲနေလို့ပါ။
အဲဒါကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ ပြန်ပြီး သုံးသပ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
တယ်လဲနားဝေးတဲ့မောင်ဂွပဲ။ ပြည်သူပိုင်ဆိုတာအမည်ပိုင်ဆိုင်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းပြီးပါပကော။ ဒါထက်မောင်ဂွတို့မိုးပြာထဲမှာမောင်ဂွရောသောတပန်ဖြစ်ပြီလား။ သောတပန်ဖြစ်တဲ့သူဘယ်သူရှိလဲ။
ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကို ကိုယ်ကြိုက်သလိုလုပ်လို့စီမံခန့်ခွဲလို့ ရမှပိုင်ဆိုင်တယ်မည်ပါတယ်။ တခါတလေအမည်ခံပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ -အုပ်ချုပ်သူအစိုးရသည် (တရားတာမတရားတာခဏထားပါ) တိုင်းပြည်ရဲ့တွကို တိုင်းပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ရေမြေတောတောင်သယံဇာတပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာ အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ အာဏာစက် ကိုအသုံးပြုပြီး စိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အတွက် ပိုင်ဆိုင်တယ်မည်ပါတယ်။
ပြည်သူပိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာသော့ခတ်သိမ်းထားတဲ့ ပြည်သူပိုင်သိမ်းထားတဲ့အိမ်တလုံးကို ပြည်သူတယောက်က တက်နေရင် အဖမ်းခံရမှာပဲ။ ဒါပြည်သူအမည်ခံပြီးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်းပြည်သူပိုင်အမည်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်ရှင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်ရှင်မသိအောင်ယူရင်ခိုးမှုမြောက်ပါတယ်။ ခိုးမှုမြောက်တာကိုအပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးမြှောက်ပေးရင်ကြံရာပါ အားပေးအားမြှောက်မှုမြောက်ပါတယ်။
ရေတွေကပိုင်ပေမဲ့ အစိုးရကမသုံးရလို့ အမိန့်ထုတ်တားတဲ့ ကန်ကို သွားသုံးရင်တော့ အဖမ်းခံရမှာပေါ့။ အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတဲ့ ရေကိုသုံးရင်တော့ ခိုးမှုဘယ်မြောက်မလဲ။ သစ်တောကြိုးဝိုင်းဆိုပြီးအစိုးရကသတ်မှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာသစ်ကိုခိုးယူသူသာလျှင်ခိုးမှုမြောက်ပြီး မျှစ်ကိုမယူရလို့ ကန့်သတ်မထားတဲ့အတွက်ခိုးမှုမမြောက်ပါ။ ဥာဏ်ရည်မမှီလို့
စကားကိုကပ်ပြောရရင်တော့ အစိုးရကအကယ်၍သာ မှိုမျှစ်မခူးရလို့ အမိန့်ထုတ်ခဲ့ရင်လည်း ခူးတဲ့သူတွေ ကိုဖမ်းလို့ရတယ်။ ဒါမျိုးအမိန့်ကလည်းထုတ်မှာမဟုတ်ပါ။ ဒီလိုအမိန့်မရှိတဲ့အတွက် ခွင့်ပြုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။
ရွာထဲအ၀င်ကျဲနေချိန်မှ ကျွန်တော့်ကိုရည်ရွယ်ရေးတဲ့ကွန်မန့်ကို သိတာနောက်ကျလို့ နောက်ကျမှပဲ ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒီ ko out of ဆိုတဲ့လူရဲ့ပို့စ်ဟာ ယုတ္တိမရှိပါဘူး။ မိတ်ဆွေတို့ သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ပထမ အတွေးအခေါ် ရှုထောင့်ကနေ ကြည့်ရအောင်။ ကျနော် ပြောနေရင်းနဲ့ အခု သတိထားမိတာလေး ရှိလာလို့ပါ။ သူက ဒီလိုရေးပါတယ်။ “အရွယ်ကောင်းတုံး အလုပ်အကိုင် စီးပွားရေး လုပ်ရမယ့်အစား သားသမီးကို ပစ်ပြီး တရားထိုင်ဖို့ သီးခြားအချိန်ပေးရတာတွေဟာ တာဝန်ဝတ္တရား လစ်ဟင်းမှုတခုဖြစ်ပြီး လူ့လောက မတည်ငြိမ်ဖို့ ရောဂါရဲ့ အစပဲ”။ ကျနော်သိသလောက် ဒီဝါဒဟာ မိုးပြာဂိုဏ်းရဲ့ အဓိကဝါဒတခုပါ။ အခုဟာက ဆောင်းပါးရှင်ကို ပြောပေမယ့် မိုးပြာဂိုဏ်းနဲ့ ဦးညာနကိုပါ ပြောတဲ့သဘောပါ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဒီအယူကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ ရှေ့စကားနဲ့ နောက်စကား မညီပါဘူး။ ယုတ္တိလည်း မရှိဘူး။
သူတို့ မိုးပြာဂိုဏ်းဝင်တွေ ပြောရင် ဘုရားရှင်ရဲ့ ဝိနည်းတို့ တရားဒေသနာတို့ ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ ပါးစပ်က မချပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်က သေချာအောင် သူတို့ ဘုရားရှင်ကို ကြည်ညိုလား ယုံကြည်လားလို့ မေးလိုက်တော့ အားလုံးက ကြည်ညိုပါတယ် ယုံကြည်ပါတယ် သူ့လမ်းစဉ်ကို ယုံပါတယ်ဆိုပြီး ဖြေကြတာ အားလုံး မြင်မှာပါ။
ဒါဆို သူတို့ ပြောပုံအရဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တောင် သူတို့စွဲချက်ကနေ မလွတ်တော့ပါဘူး။ အသေးစိတ်တော့ ကျနော်က ဥပမာတောင် မပြောဝံ့ပါ။ ဘုရားရှင် တောထွက်တော်မူတာက သက်တော် ၂၉ မှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ကို အရွယ်ကောင်းလေးပါ။ ဘုရားဖြစ်တော့ သက်တော် ၃၅ ပါ။ တကယ့်ကို အရွယ်ကောင်းလေးပါပဲ။ သူ့မှာ စီးပွားရေး လုပ်စရာ မရှိပေမယ့် သူ့ခမည်းတော် မျှော်လင့်ထားတဲ့ ဘုရင်ကြီး ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ့် တာဝန်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ တာဝန်တွေလဲ ရှိမှာပါ။ သားတော် ရာဟုလာကလဲ မွေးကင်းစကလေးပါ။ ဘာလို့ တောထွက်သလဲ ဆိုတော့ တရားရှာဖို့ပါ။ တောထဲကျတော့လဲ တရားထိုင် ရတာပါပဲ။ ဘာလို့ တောထွက်ရတာလဲ နန်းတော်မှာနေပြီး လုပ်လို့ မရဘူးလားဆိုတော့ မရလို့ပါ။ လောကီနဲ့ လောကုတ္တရာ နယ်နှစ်နယ်က သီးသန့်နှစ်ခုပါ။
ဒါဆိုသူတို့ ပြောတဲ့စွဲချက်နဲ့ ဝါဒအရ ဗုဒ္ဓတောင် မလွတ်တော့ပါဘူး။ သူတို့က ဒီဝါဒကို သုံးပြီး ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို အပြစ်တင်ပေမယ့် ဘုရားရှင်ကျတော့လည်း သိပ်ကြည်ညိုပါတယ်လို့ ပြောကြတာပါ။ ကဲ စဉ်းစားကြည့်ရအောင် သူတို့ ပြောသလိုဆို ဘုရားရှင်တောင် မလွတ်တော့ပါဘူး။ သူတို့ ပြောတဲ့အတိုင်း ဘုရားရှင်ကို ကြည်ညိုပါတယ်ဆိုလဲ ဒီဝါဒကို လွှင့်ပစ်လိုက်ရမှာပဲ။ ရှေ့စကား နောက်စကားမှ မညီတော့ပဲကိုး။ ဘာလို့ အဲဒီလို ဖြစ်တာလဲ ဆိုတော့ သူတို့က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို အပြစ်ပြောချင်နေလို့ စကားတွေက အမြဲပဲ ရှေ့နောက်မညီ ဖြစ်နေတာပါ။
တကယ်တော့ ကိုဆာမိ ပြောသလို သူတို့က မိုးပြာဂိုဏ်းဆရာ ဦးဥာဏကို ဘုရားလုပ်ချင်တာပါ။ ခက်တာက ဦးညာန နာမည်နဲ့ဆို ဘယ်သူမှ သိမှာမဟုတ်လို့ ဗုဒ္ဓရဲ့ နာမည်ကို ယူသုံးတာပါ။ တကယ်တမ်း အားကိုးလောက်တဲ့ လူအရေအတွက် ရလာရင် ဗုဒ္ဓကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ရှုတ်ချမှာက ဒီလူတွေပါ။ အမှန်တော့ ဒီဝါဒဟာ ဘုရားလက်ထက်ကတည်းက ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဝါဒပါ။ တိတ္ထိဆရာကြီးတွေရဲ့ ဝါဒဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဖြင့် တလောကလုံး တရားထိုင်နေကြတာလားလို့ မေးရင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားရှင် ကိုယ်တိုင်က လူရဲ့ဥဏ်အဆင့်အတန်းကို ကြည့်ပြီး ဒါန သီလလောက်ပဲ ရမယ့်လူကို ဒါန သီလလောက်ပဲ ဟောသလို တခါတည်း တရားရမယ့် လူမျိုးကိုလည်း သင့်တော်တဲ့ ကမ္မဌာန်းတခုခု ပေးပြီးတရားပြပါတယ်။ အမှန်တော့ ဒီနေ့ ခေတ်မှာလဲ တကယ်တရားထိုင်သူက အနည်းစုပါ။ ထိုင်တဲ့လူကလည်း လုံးဝ ဝတ်ကြောင်ကို စွန့်နိုင်တဲ့ အထိတောင် မလုပ်နိုင်တာ များပါတယ်။ တရားရိပ်သာတွေမှာ ဘာလို့ သွားရတာလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆို မလုပ်ဖြစ်လို့ စပြီးလုပ်ဖြစ်အောင် အလေ့အကျင့် လုပ်ရတာပါ။ သီးသန့် ဆောင်းပါးရေးပြီး ကန့်ကွက်ရလောက်အောင် များတဲ့လူ အရေအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာလို့ ဒါကို ရေးရတာလဲ ဆိုတော့ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို အပြစ်တင်ချင်လွန်းလို့ပါ။ နောက်ပြီး သူပြောသလို တရားကို နာရီပေါင်းများစွာ ထိုင်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆွေးနွေးတဲ့ မိန်းကလေးတဦး ပြောသလို လျောင်း ထိုင် ရပ် သွား ဣရိယာပုတ်လေးပါးလုံးမှာ သတိကပ်ပြီး နေဖို့ လမ်းညွှန်တာပါ။ ဒီပို့စ်ရဲ့ အဓိကအချက်က ဒီဟာပါ။ သူတို့ဟာက အတွေးအခေါ်ရှုထောင့်အရကြည့်ရင် ယုတ္တိလုံးဝမတန်ပါဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကို ကြည်ညိုပါတယ်လဲ ဆိုသေးရဲ့ သူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်း ရှုတ်ချနေပြီး တချိန်တည်းမှာ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို ကြည်ညိုပါတယ် သူ့လမ်းစဉ်ကို လိုက်နာပါတယ်ချည်းပဲ ပြောနေပါတယ်။ သူတို့စကားတွေ ဘယ်လိုမှ ယုတ္တိမရှိလို့ သူတို့ဝါဒတွေဟာလည်း လိမ်ညာထားတာတွေပါ။
ဆွေးနွေးလိုသူရှိရင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ အဓိကအချက်က လုံးဝ ယုတ္တိမရှိတဲ့အတွက် ဒီဆောင်းပါးဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်လည်း မဟုတ်သလို သူတို့ဟာ ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညိုပါတယ် ဆိုတာလဲ အဓိပ္ပါယ် မရှိပါဘူး။ သူတို့က ပါဠိစာတွေ လျှောက်ရေးပေမယ့် သူတို့ရဲ့ စကားတွေဟာ ရှေ့နောက်လုံးဝ မညီပါဘူး။
မေ့လို့ ကျနော်ပြောတဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့ မိန်းကလေးတဦးဆိုတာ မ Nyein Nyein ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မငြိမ်းငြိမ်း ဆွေးနွေးလိုတာ ရှိရင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးရဲ့ အဓိကအချက်က ယုတ္တိမရှိပါဘူး။ ရေးသူရဲ့ ရှေ့စကားနဲ့ နောက်စကား မညီပါဘူး။
ဒီပို့စ်ရဲ့ အဓိကအချက်က ဒီဟာပါ။ သူတို့ဟာက အတွေးအခေါ်ရှုထောင့်အရကြည့်ရင် ယုတ္တိလုံးဝမတန်ပါဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကို ကြည်ညိုပါတယ်လဲ ဆိုသေးရဲ့ သူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်း ရှုတ်ချနေပြီး တချိန်တည်းမှာ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို ကြည်ညိုပါတယ် သူ့လမ်းစဉ်ကို လိုက်နာပါတယ်ချည်းပဲ ပြောနေပါတယ်။ သူတို့စကားတွေ ဘယ်လိုမှ ယုတ္တိမရှိလို့ သူတို့ဝါဒတွေဟာလည်း လိမ်ညာထားတာတွေပါ။
လို့ပြောထားပြီး ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ထားတော့ ပြန်ရေးဖို့ ၀တ္တရားရှိလာသလိုပဲ
ဗုဒ္ဓ ကိုကြည်ညိုပါတယ်.သူ့လမ်းစဉ် အမှန်(မဇ္ဈိမ ပဋိပဒါ )ကိုလည်းယုံကြည်ပါတယ်
တရားမသိခင် (တရားမဟုတ်တာတွေသိနေတုန်း) တရားအားထုတ်တယ်ဆိုပြီး(စိတ်အေးချမ်းအောင်)
ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိထားတဲ့ တရားသဘောတွေ သိလာမယ်ထင်နေကြလို့လား
တရားမသိခင် အရင်ကျင့်ခိုင်းတဲ့ လမ်းစဉ်ကို ရှုံချတာပါ(ဘုရားလမ်းစဉ် အမှန်က မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ပါ)
ကျင့်ကြစေချင်ပါတယ်။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး လုံးကျင့်ဖို့ ဗုဒ္ဓ ဟောခဲ့တာပါ.တရားစခန်းဝင်တဲ့သူတွေ
သမ္မာဝါစာ အဓိပ္ပယ် သိကြပါသလား(သိကြမှာပါ) တရားစခန်းမှာ သမ္မာဝါစာ ဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲ
ဥပမာ တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် က အလင်းရောင်လိုချင်လို့ ၊ အန္တရယ်ကင်းချင်လို့ မီးပုံ တစ်ပုံ ဖန်တီး
ထားချင်တယ်၊ ထင်းပုံကြီး တစ်ပုံ စုဆောင်းပြီးပြီ။ ယပ်ခပ်နေလို့ မီးတောက်လာမှာ လား၊ မီးတောက်ပြီးသား
သူ တစ်ယောက်ဆီက မီးတစ်စ ရမှ ကြိုးစား ယပ်ခပ်မှ ကျွန်တော် မီးပုံတစ်ပုံ ဖန်တီးနိုင်မှာလား
မီးတောက်ပြီးသားသူ ဆိုတာ (ဘုရား)ဗုဒ္ဓကိုပြောတာပါ။ သူ့တရားမသိခင်(မီးတောက်တစ်ခုမရခင်)
ကြိုးစားယပ်ခပ်နေတဲ့သူတွေ(တရားမသိခင် စခန်းဝင်ကျင့်သူတွေ) ကို မီးပုံတစ်ခု ပျိုးတတ်ဖို့
(Procedure )လမ်းစဉ် ရှေ့နောက်လွဲနေလို့ လွဲနေတဲ့လမ်းစဉ်ကို ရှုံချတာပါ.၊
ဟိုဘက်ကမ်းကို ကူးသွားချင်တဲ့သူကို ရေကူး အရင်သင်စေချင်တာပါ၊(ပြီးမှ မကူးခတ်ခင် ရေကူးကျင့်စေချင်တာပါ) ဟိုဘက်ကမ်းကို ကူးသွားချင်ရင် ရေကူးအရင်ကျင့်ကွာ လို့ပြောကြသူတွေကို
ရှုံချချင်တာပါ (အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့ ဟုတ်သလိုလိုပဲပေါ့၊ ရေမနစ်စေချင်လို့)ကပ်သပ်ပြီး
(ငါက မင်းကူးတတ်ပြီးသားထင်လို့ မြန်အောင် စေတနာနဲ့ )ပြောတာပါ ဆိုရင်တော့ ဘာမှတော့
ပြန် ပြောစရာမရှိပါ စိတ်ထဲကတော့ ဒီလိုတွေးမိမယ်.(သူစေတနာက ရေနစ်သေစေမဲ့ စေတနာဆိုး)
စေတနာတော့ စေတနာပဲ (အဆိုး။အကောင်း ကွာတာလေးပဲ)
ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညို ကြပါတယ်။ လမ်းစဉ်ကိုလည်း လေးစားလိုက်နာကြပါတယ်
လမ်းစဉ် မတူသူတွေ အပေါ် အမြင်မတူတာပါ
ကဲ kthwinzayarmyo ရေ
အခုလဲ ခင်ဗျားပြောတာကို ကျနော်မနည်း ဖတ်ယူရတယ်။ ခင်ဗျား ဘယ်လိုပဲရေးရေး ခင်ဗျားတို့ဝါဒရဲ့ ရှေ့စကား နောက်စကား မညီပုံတွေကို ဖုံးလို့မရပါဘူး။ အမှန်တော့ ကျနော်က ဒီဟာကို ပါဠိတွေ လျှောက်ပြောပြီး တရားထိုင်ရင်ရတဲ့ ငြိမ်းအေးမှုတွေ ဘာတွေပြောနေရင် လေကုန်တာပဲရှိမယ်။ အဓိကက အတွေးအခေါ်စည်းမျဉ်းရဲ့ သဘောက ဆန့်ကျင်ဘက်အနက် ထွက်လို့မရပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက် အနက်ထွက်ရင်လည်း ဘယ်လိုထူးခြားတဲ့ အခြေအနေကြောင့်ဆိုတာ ရှင်းပြရပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဝါဒက ရှေ့စကားနဲ့ နောက်စကားက အချင်းချင်း ဆန့်ကျင်ချေဖျက်နေပါတယ်။
ကျနော်သိပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဝါဒကို ခင်ဗျားတို့တောင် သိပ်မသေချာပါဘူး။ ဒါကြောင့် မေးတတ်သူရောက်လာရင် ပြန်မဖြေတာတို့ မဆိုင်တဲ့ ပါဠိတွေပြောပြီး မျက်စိလည်အောင် လုပ်နေကြတာပါ။ ကျနော်က ဒီဝါဒတွေကို ဝင်မဆွေးနွေးတာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ အရင်တုန်းက ခင်ဗျားတို့ ဝါဒီတယောက်က ကျနော့်ကို စောင်းမြောင်းပြီး ရေးတယ်လို့ ထင်ရအောင် ဆောင်းပါးတွေ ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ အထင်လဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် တခါတလေ ကွန်မန့်တွေကို သတိထားကြည့်ရတာ တချို့မိတ်ဆွေတွေတောင် အကဲခတ်မိပုံရပါတယ်။ သူက အစတုန်းက မိုးပြာဂိုဏ်းရဲ့ အယူအဆတွေကို ဘုရားနာမည်သုံးပြီး ရေးတာ တချို့ရွာသားတွေတောင် သာဓုခေါ်ကြပါတယ်။ ကျနော် အဲဒီကတည်းက ဒီဝါဒတွေဟာ ထူးခြားနေလို့ မိုးပြာဝါဒဆိုတာ သိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဝင်ဆွေးနွေးရင် သူ့အကြိုက် ဖြစ်မှာစိုးလို့ မဆွေးနွေးတာပါ။ ကျနော်က အဲဒီလို လူမျိုးကို ရွံပါတယ်။ ကြောက်တာ မဟုတ်ပါ။ ရွံတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျနော်က အမှန်တော့ အသစ်ဖြစ်လို့ ဒီလို ကိစ္စမျိုးကို လူဟောင်းတွေက လုပ်သင့်တယ်ဆိုပြီး မဝင်တာပါ။ အခုက သူကြီးက ကျုပ်နာမည်ကို ရွတ်ပြီး လျှာကြီးတတောင်လောက် ထွက်လာတာကို မြင်လိုက်လို့ပါ။
ကဲ အဓိကဝါဒကိုပဲ ပြန်သွားရအောင်။ ခင်ဗျားတို့ ပြောတဲ့ ဝါဒအရ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တောင် ခင်ဗျားတို့ ရှုတ်ချခံရမယ့် စာရင်းမှာပါနေသလို ရဟန္တာကြီးတွေလည်း တယောက်မှ မလွတ်ပါဘူး။ ရှင်သာရိပုတြာတို့ ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်တို့ အားလုံးဟာ သူတို့မိသားစုရဲ့ အကြီးဆုံးသားတွေပါ။ ခင်ဗျားတို့ စွပ်စွဲချက်အရဆိုရင် သူတို့ဟာ တာဝန်ဝတ္တရား ပျက်ကွက်သူတွေလို့ ပြောရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျန်သူတွေလည်း အတူတူပါပဲ။ သိပ်ရှည်မှာစိုးလို့ တယောက်ချင်းကို မပြောတော့ပါဘူး။
နောက်ပြီး ဘုရားရှင်က ဧဟိဘိက္ခူ ချစ်သားရဟန်း လာလော့ ငါဘုရားသာသနာမှာ မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သုံးတော့လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ရှိတဲ့ သားမယား ရာထူးတာဝန်တွေကို ထားခဲ့ရတာပါ။ ခင်ဗျားတို့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ပဲ တိုက်ကြည့်ပါ။ ခင်ဗျားတို့ ဝါဒအရ ဘယ်လိုမှ ခင်ဗျားတို့နဲ့ မတူတဲ့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို ခင်ဗျားတို့ ကြည်ညိုပါတယ်။ သူ့လမ်းစဉ်ကို လိုက်နာပါတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုယုံရမှာလဲ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးပါအုံး။
ဒါပေမယ့် အဲဒီလောက် ပါရမီ မရှိသေးလို့ လူဝတ်ကြောင်နဲ့ပဲ နေပြီး ဒါန သီလလောက်ပဲ လုပ်နိုင်သူတွေကိုလည်း ဗုဒ္ဓက အပြစ်မတင်ပါဘူး။ ကျနော်ကွန်မန့် တခုမှာ ပြောခဲ့သလို ဗုဒ္ဓကို ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး တယောက်လို့ မြင်ကြည့်ရင် ဆရာကြီးရဲ့ ကျောင်းမှာက အတန်းစုံ ရှိပါတယ်။ ဆရာကြီးက သူငယ်တန်းကို သူငယ်တန်းလောက်ပဲ သင်ပေးပြီး အထက်တန်းအဆင့်ကို သူနဲ့တန်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို သင်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခုတော့ မှတ်ထားပါ။ သူငယ်တန်း မအောင်သေးပဲနဲ့ အထက်တန်းစာ သင်ချင်လို့ မရပါဘူး။
ကဲ ခင်ဗျားပြောတဲ့ မီးပုံဥပမာအနေနဲ့ ပြန်ပြောရင် တရားစခန်း ဝင်သူတွေလာလည်း သူတို့ယုံကြည်တဲ့ ဆရာသမား ရှိပါတယ်။ ဥပမာ မဟာစည်ဆရာတော်တို့ စွန်းလွန်းဆရာတော်တို့ သူတို့ မရှိတော့ရင်လည်း သူတို့ အဆက်အနွယ် ဆရာတော်ကြီးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလူတွေက ရှင်းပြပေး လမ်းညွှန်ပေးတာပါ။ သူတို့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ယုံကြည်လို့ပါ။ ခင်ဗျားတို့က ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကို မယုံလည်း ခင်ဗျားတို့ ယုံကြည်တဲ့ ဆရာရဲ့ နည်းနဲ့ပဲ ကျင့်ကြပေါ့။ ရောက်ပါလိမ့်မယ် တနေရာကိုပေါ့။
နောက်ပြီး ခင်ဗျားပြောတဲ့ ရေကူးသင်တာနဲ့ ရေကူးကျင့်တာ ဘယ်လိုကွာလဲတော့ မသိဘူး။ ကျနော်ကတော့ စက်ဘီးစီးသင်တာတို့ ရေကူးသင်တာတို့ဟာ သင်တာနဲ့ ကျင့်တာဟာ အတူတူပဲ တပြိုင်တည်းလို့ ထင်ပါတယ်။ အလေ့အကျင့်က သင်သွားတာပါ။ ရေကူးမှတ်စုစာအုပ်တွေကျက် စက်ဘီးစီးနည်း လမ်းညွန်တွေဖတ်ပြီး အဲဒါတွေကို တတ်ပြီဆိုရင်တော့ စမ်းကြည့်ပါ။ ဒူးပြဲတာတို့ ရေနစ်တာတို့ တကယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အမှန်မှာ ခင်ဗျားတို့ကမှ တကယ်ကို အဲဒီလို ဖြစ်နေတာပါ။ အခု ခင်ဗျားပြောတဲ့ တရားရိပ်သာတွေကမှ နည်းစနစ်လောက်ပြပြီး ကိုယ်တိုင်ကူးခိုင်းတဲ့နည်းပါ။ ခင်ဗျားတို့ကတော့ ဦးဥာဏရေးထားတဲ့ ရေကူးနည်းစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး ရေကူးတတ်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထင်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
စကားမစပ် အောက်မှာ ခင်ဗျားတို့ချစ်တဲ့ ဒုဂိုဏ်းချုပ်ကြီး အဲ ဆောရီး ယောင်သွားလို့ သူကြီးဘာဓတ်ပုံတွေ လာပြနေလဲ မသိဘူး။ နောက်ပြီး မိတ်ဆွေတွေကို ပြောရရင် ဒီဆေးပေါ့လိပ် လုပ်ငန်းနဲ့ တူတဲ့ ဘာသာရေးတို့ အနာဂျက်ဆင်ဆေးဝါးပမာ ဝိပဿနာတို့ အချိုမှုန့်ပမာတို့ ငရုတ်သီးမှုန့်ပမာတို့ ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဟာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုတုန်းက ကွန်မြူနစ်ဝါဒရဲ့ ဘာသာရေးဟာ လူတွေအတွက် ဘိန်းပဲဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အသွင်ပြောင်းထားတာပါ။ အဲဒီတုန်းက ကွန်မြူနစ်တွေလဲ ဒီလိုပဲ ပြောပြီး လီနင် စတာလင် မော်စီတုန်းပြောရင် အားလုံးမှန်တယ်ဆိုပြီး လုပ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘာသာတရားကို ချေမှုန်းပြီး သူတို့ကိုယ်သူတို့ အကိုးကွယ်ခံဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့နည်းပါ။ ဦးဥာဏလည်း အခုဒီလိုပဲ လုပ်တာပါ။
ဟိန္ဒူတွေ အားပေးလို့ပေါ့။ အချင်းချင်းပဲလေ။(လေ့လာမိသလောက်ပါ၊ နဂို ကလည်းဟိန္ဒူပါ။ အိန္ဒိယ မှာ
ယောဂကျင့်တဲ့ ယောဂီတွေ အများကြီးနဲ့ သူတို့လည်းအောင်မြင်ပါတယ်.နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း
စိတ်အေးချမ်းဖို့ အတွက် ကျင့်ကြပါ(ကျင့်တုန်း အေးချမ်းပါတယ်)
အရှိန်ကုန်သွားရင်တော့ (စကားပုံက ဗြဟ္မ ပြည်မှာ တ၀င်းဝင်း ၀က်စားကျင်းမှာ တရှုံ့ရှုံ့)
ယောနိသော မနသီကာရဖြစ်ရင်တော့(စိတ်ထားတတ်သွားရင်တော့ )
ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ် လွတ်လွတ် နေတတ်သွားမှာပါ။ တရားသိ စေချင်တာပါ။ ပြီးကျင့်ကြပါ၊
ရေကူးတတ်တာနဲ့ ရေကူး ကျွမ်းတာ လေ့ကျင့်မှု ကွာပါတယ် .ကူးတတ်ရင် ကျင့်ကြပါ၊
မကျင့်ရင် တကယ်ကူးတော့ ရေထဲမှာ ကြွက်တက်လိမ့်မယ်။(သိပြီး ကျင့်စ၇ာမလိုဘူး ထင်သူတွေ အတွက်ပါ၊ တကယ်မသိခင် အထင်တွေပါ)
ကျင့်စဉ်တွေ ထားခဲ့တာ လက်ခံပါတယ် ။မဟာယာန၊ ထေရ၀ါဒ၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ (ထေရ၀ါဒမှာပဲ
မဟာစည်၊ မိုးကုတ်။ ဖားအောက်။ စသည်) ကျင့်စဉ်တွေ တူကြလို့လား
ကျွန်တော်ပြောတာ လမ်းစဉ်ပါ.Procedure ပါ။ သိဖို့ အရင်ကြိုးစားကြ ဖို့ပါ
ကဲ မိတ်ဆွေ ခင်ဗျားရဲ့ ရေကူးနည်း ဥပမာကို ပြန်ရှင်းတာရော ခင်ဗျားကို ပြန်ဖြေတာရော အပေါ်မှာ ပြောပြီးပါပြီ။ ထေရဝါဒနဲ့ ခင်ဗျားတို့ မတူရင် ထေရဝါဒလူတွေက မဟာစည် မိုးကုတ် ဖားအောက်နည်းအတိုင်း ကိုယ်သန်ရာသန်ရာ ကျင့်ပါလိမ့်မယ်။ မဟာယနကတော့ သူ့လမ်းစဉ်နဲ့ သူပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ ပစ္စုပ္ပန်ဂိုဏ်းကလည်း ဦးဥာဏနည်းနဲ့ ကျင့်ကြပေါ့။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ ဝါဒအရတော့ ခင်ဗျားတို့ဟာ ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အပေါ်မှာ ခင်ဗျားတို့ အတွေးအခေါ်မှားပုံကို ပြောပြီးပါပြီ။
အတွေးအခေါ် ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဘာပုံတွေ လာပြနေတာလဲ သဂျီးမင်း။
ဆေးလိပ်သောက်ရင် ရောဂါရမယ်ဆိုတာသိလို့ ဆေးလိပ်ကိုသောက်တဲ့လူရှိတာရင်တောင်မှဘဲ…ဦးရေးသိပ်မများလောက်ဘူး…အေးဒါပေမဲ့ ၀ိပဿနာတရားကိုဆေးဝါးဘဲလိုထင်ပြီး သောက်တာကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်…တကယ်တမ်းဆေးဝါး မှန်ရင်တော့ဟုတ်တယ်…အခုခေတ်စားလို့ လိုက်လုပ်ကြတာများတယ်….ဘုရားခေတ်မှာ စခန်းသွင်းအားထုတ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းမရှိခဲ့ဘူး…ဂျိန်းနိကဏ္ဍတရားကျောက်ဖြာနက်စခန်းဆိုတာ တော့ကြားဖူးတယ်…
တကယ်တော် ၀ိပဿနာခေတ်စားတာ မြန်မာပြည်မှာ မိုးကုတ်မဟာစည်နောက်ပိုင်းလောက်မှ နည်းနည်း များလာတယ်လို့ပြောရမယ်..
နောက် ဗုဒBuddha ဆိုတဲ့ စကားလုံးလည်း….မင်းတုန်းမင်လက်ထက် ဆရာယုဒသန် ကရေးလိုက်လို့ ဗုဒဆိုတဲ့နာမည်စပေါ်တာ…အဲဒီရှေ့က သမ္မာဒိဋ္ဌိလိုဘဲခေါ်တယ်….
ဟော သူပြန်လာပြီ ချိုင်းထောက်ကြီးနဲ့ အဲလေ မှားလို့ ko out of ပါလား။ ပို့စ်ပိုင်ရှင်က ဘာမှ မဖြေဝံ့ပဲ ပုန်းနေပြီး အခုမှ ပေါ်လာတာကိုးဗျ။ ကိုယ့်ဆရာလို ကိုယ်လေ့လာနေတဲ့ဟာကို ယုံသလား မယုံသလား မပြောရဲပဲ သူများတွေကို လျှောက်ပြီး ဝေဖန်နေတော့ အခက်သားပေါ့။ ဘုရားခေတ်က စခန်းသွင်း အားထုတ်တဲ့ သမိုင်းမရှိဘူးဆိုတာ ခေတ်ချင်း လူချင်း မတူလို့ပါ ကိုယ့်ဆရာ။ အဲဒီခေတ်က လူတွေက ပါရမီ အရင့်အမာတွေ များတယ်ဗျ။ ထေရဝါဒအရတော့ သက်တော်ထင်ရှား ဘုရားကို ဖူးခွင့်ရတယ်ဆိုတာ နည်းတဲ့ ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ ကိုယ့်လူတို့ ဂိုဏ်းကတော့ ဘယ်လို ယူသလဲ မသိဘူး။ အဲဒီလို ပါရမီရင့်တဲ့အပြင် သူတို့ခေတ်က အင်တာနက်တို့ ညပိုင်းကိုရီးယားကားတို့ ကြည့်စရာ မလိုသေးဘူး။ ဒီတော့ လူတွေက ညနေပိုင်းဆိုရင် ပန်းနံ့သာ လက်စွဲပြီး ဘုရားကျောင်းတော်ကို သွားကြရော။ ဘုရားက ဟောတဲ့တရားကို ခန္ဓာပေါ်မှာ ဥဏ်စိုက်ပြီး ကြည့်လိုက်တာနဲ့ အကျွတ်တရား ရကုန်ရော။ အဲဒီတော့မှ သား မယားတွေ ရာထူးတာဝန်တွေ ပစ်ပြီး သာသနာ့ဘောင် ဝင်သွားတော့ ကိုယ့်လူတို့ ဂိုဏ်းရဲ့ဝါဒအရ ဝတ္တရားပျက်သူတွေ ဖြစ်ကုန်ရော။
ကျောက်ဖြာနက်စခန်းကတော့ ခင်ဗျားတို့ ခဏခဏပြောတာ ကြားဖူးတယ်။ ဘယ်စာပေထဲမှာ တွေ့တာလဲ။ ခင်ဗျားတို့ ဆရာဦးညာန ရေးတဲ့စာအုပ်ထဲကလား။ သူဘာသာသူလုပ်တာ ကိုယ်နဲ့ဘာဆိုင်လဲ။ တကယ်ဆိုရင် ဂျိန်းကလဲ ထာဝရဘုရား အယူကိုပယ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုက္ခကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပုံကတော့ ထေရဝါဒနဲ့ ကွာသွားပြန်ရော။ အဲဒါကတော့ နောက်မှ ကိုယ့်လူတို့ သတ္တိရှိလာမှ ဆွေးနွေးမယ်။ မိုးပြာဝါဒီတွေပဲ ဖြေပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မိုးပြာမဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းထားသူတွေ ကျေးဇူးပြုပြီး ဝင်မရှုပ်ပါနဲ့။
အော်နောက်ပြီး highlight ထပ်လုပ်ရအုံးမယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဆရာရဲ့ ဝါဒက မှားနေတယ်။ ရှေ့မှာပြောတော့ တမျိုး နောက်က စကားကတမျိုး အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။ အဲဒီလောက် မှားနေသူတွေက ပြောတဲ့ စကားတွေ မှန် မမှန်ဆိုတာ ကျန်တဲ့လူက စဉ်းစားရတာပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ ဝါဒကြီး ဒီလောက်လွဲနေတာ ဝန်ခံလိုက်စမ်းပါဗျာ။ ဘယ်လိုလဲ ကျုပ်နဲ့ ဆွေးနွေးရတာ အရသာ ရှိတယ်မဟုတ်လား။ ဆဲလဲ မဆဲပါဘူးနော်။
ုKo San Hla ကြီးခင်ဗျား….
– ကိုယ်သိတဲ့ အရာနဲ့တူမတူ နှိုင်းယှဉ်လို လို့မေမြန်းခြင်း…
– တဖက်လူကို နှိပ်ကွပ်လို လို့မေးမြန်းခြင်း….
– မသိလို့ ရိုးရိုးသားသား မေးမြန်းခြင်းစသည် ရည်ရွှယ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်…ကိုစံလှကြီးမေးတာ မရိုးသားဘူးလူးလို့မြင်ပါတယ်….
ဟုတ်တယ်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သူများဆုံးဖြတ်ပေးရင် ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဘယ်ဖြစ်တော့မလဲ?
ကျွန်တော်ကို အထက်ပါမေးခွန်းတွေမေးလိုက်လို့ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဖြေပေးလိုက်လို့ ခင်ဗျာ အတွက်ဘာပညာရမှာ မို့လို့လဲ?
ကျွန်တော်မေးထားတာလည်း ခင်ဗျာမဖြေပါဘူး…ဘယ်နေ့ကစပြီး ဗုဒ(Buddha) ဘာသာဝင်စဖြစ်လဲ? ဆိုတာလေ….
ဘုရားတရားဟာ ဘယ်လောက်အထိလွတ်လပ်လဲဆိုတာ သိရအောင် အောက်ပါ
ဆရာစွဲဖြင့်၊ လွှဲပုံစိတ်ချ မယူကြလင့်…..
အမယ် အမယ် အခုမှ လာပြီးအစွမ်းကောင်းနေတယ်။ အစကတည်းက ဒီလိုလုပ်စမ်းပါ။
ဒီနေ့အထိ ကျုပ်မေးခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတိုင်းဟာ မသိလို့မေးတာ နည်းတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် တခါတလေတော့ ခင်ဗျားတို့ကို မသိလို့မေးတာ ရှိတယ်။ ကျုပ်မသိတာလဲ သဘာဝ ကျတယ်လေဗျာ။ အထူးသဖြင့် ခင်ဗျားတို့ ဝါဒအကြောင်းကိုပေါ့။ ကျုပ်သိစရာလဲ မလိုဘူးပေါ့။ ကျုပ်က နည်းနည်းအကဲခတ် ကြည့်တာနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို လေ့လာပါ ပြောရင်လဲ ကျုပ်က ခင်ဗျားတို့ဆရာ ဦးဥာဏရဲ့ ဝါဒကို မလေ့လာနိုင်သေးဘူး။ ဒီတော့ ခင်ဗျားတို့ မိုးပြာဝါဒီတွေကိုပဲ ခင်ဗျားတို့ဆရာ ဦးဥာဏရဲ့ တရားကြီး ခင်ဗျားတို့ ပြောနေတဲ့ တကမ္ဘာလုံး ပြန့်နေပြီဆိုတဲ့ တရားကြီးကို မေးရမှာပေါ့။ မသိလို့ မေးတာပါသလို ခင်ဗျားတို့ ယုံကြည်ချက်ကို စမ်းချင်တာလည်း ပါတယ်။ နောက်ပြီး ခင်ဗျားပြောသလို နှိပ်ကွပ်ချင်တာလည်း ပါတယ်။
နှိပ်ကွပ်တယ်လို့ ပြောတာက နားဝင်ဆိုးပါတယ်ဗျာ။ အမှန်တော့ အတွေးအခေါ် အယူဝါဒကို ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာ တဘက်နဲ့ တဘက်အပြန်အလှန် မေးခွန်းထုတ်တာ ကောင်းပါတယ်။ မထင်နဲ့နော် ကိုယ့်လူ။ လောကသုံးပါးကို အကုန်အစင် သိတော်မူသောဆိုပြီး ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ရှိခိုးတဲ့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ သူ့ကို ဝါဒပြိုင်သူတွေကို အခြေအတင်မေးခွန်းတွေ ထုတ်ပြီးမှ တိတ္ထိဆရာကြီးတွေရဲ့ အယူဝါဒ မခိုင်မာပုံတွေကို ရှင်းပြတာဗျ။ အဲဒါကို ခင်ဗျားက နှိပ်ကွပ်တယ်လို့ နာမည်တပ်ရင်တော့ ခင်ဗျားသဘောပဲ။ ခင်ဗျားတို့ အကြောင်းကတော့ အားလုံးက သိကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျုပ်ကလည်း ကျုပ်ကိုးကွယ်တဲ့ ကျုပ်ဆရာရဲ့ နည်းကိုပဲ သုံးတာပါ။ ဆရာဆိုပေမယ့် ကျုပ်က ကျုပ်ပြောခဲ့သလို ဆရာကြီးရဲ့ ကျောင်းက သူငယ်တန်းမှာတောင် အငြံ့ဆုံးတပည့်ပါ။ အဓိကကတော့ ကျုပ်က ခင်ဗျားတို့ဆီက ပညာရချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သိပ်ပြီး အထင်မကြီးပါနဲ့။ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လောက် သတ္တိရှိသလဲ စမ်းကြည့်တာပါ။ နောက်ပြီး ခင်ဗျားတို့က အမျိုးမျိုး စကားကို ပြောင်းပြောတတ်တာကိုး။ ခင်ဗျား မကျေနပ်လဲ ကျုပ်ကို ပြန်မေးပေါ့ဗျ။ ကျုပ်က ခင်ဗျားမိုးပြာဝါဒကို ယုံသလားမေးရင် ခင်ဗျားကလည်း ယုံတယ် မယုံဘူးဖြေပြီး ကျုပ်ကို ဗုဒ္ဓကို ယုံကြည်သူလားလို့ ပြန်မေးပေါ့။ ကျုပ်က မလန့်ပါဘူး။
အော် အဲဒီမေးခွန်းက ခင်ဗျားမေးတာလား။ မသိပါဘူးဗျာ။ ခင်ဗျားတို့က လွယ်လွယ်လေး ပြောနေတဲ့ ကိစ္စမှာ ရှုပ်အောင် ဥတ္တိရိမနုဿတွေ ပါပရေပါပ ဘာညာကွိကွဆိုပြီး ပါဠိစာတွေ တသီကြီးရွတ်တော့ ကျုပ်က မေးတာလား ပြောတာလား မရှင်းလို့ပါ။
ကျုပ်က ပြန်ဖြေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျုပ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာ အမိဝမ်းတွင်းကတည်းက လို့ပြောရင်တောင် မမှားဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျုပ်အမေက ကျုပ်ကို ကိုယ်ဝန်ရှိကတည်းက ကလေးအတွက်ပါ ရည်စူးပြီး သရဏဂုံကို ယူခဲ့တာတဲ့။ သုပ္ပဝါသာမင်းသမီးက ရှင်သီဝလိ အလောင်းအလျာ သတို့သားကို ကိုယ်ဝန်ကတည်းက ကလေးအတွက်ပါ ရည်စူးပြီး သရဏဂုံ ယူသလိုပေါ့ဗျာ။ ဒါကတော့ ကြည်ညိုစိတ် မရှိတဲ့ ခင်ဗျားတို့လိုလူတွေ နားမလည် နိုင်ပါဘူး။
ထားပါ။ အမေကမွေးပြီး စကားစပြောတတ်တာနဲ့ ကျုပ်အဘိုးက ကျုပ်ကို သရဏဂုံကို ဆိုခိုင်းတော့တာပဲ။ အမှန်တော့ ခင်ဗျားတို့ ဝါဒအရ နားမှမလည်သေးပဲလို့ ပြောလို့ရပေမယ့် အဲဒီကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်နေပြီဗျ။ နောက်ပိုင်းတော့ ကျုပ်က အခြားဟာတွေကိုပါ နည်းနည်းပါးပါး နားလည်လာတယ်ပေါ့။ အခု ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်တာတော့ ကျုပ်အသိစိတ်နဲ့ ကျုပ်ပဲ။ မိဘဘိုးဘွားက ကျုပ်ကို မတားနိုင်တော့ဘူး။
အဲဒီတော့ ခင်ဗျားကိုလည်း ကျုပ်မေးမယ်။ ခင်ဗျားရော မိုးပြာဝါဒီဖြစ်တာ ဘယ်တုန်းကလဲ။ ခင်ဗျား အမေကမွေးတော့ မိုးပြာဆရာ ဖြစ်နေပြီလား။
အော်ထပ်ပြီး ပြောရအုံးမယ်။ ခင်ဗျားတို့ဆရာ ဦးဥာဏရဲ့ ဝါဒကြီး မှားနေတယ်ဗျ။ ခင်ဗျားတို့ ပြောတော့ ခင်ဗျားတို့ဟာ ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညိုသူတွေလို့ ပြောပြီး နောက်တော့ တာဝန်ပျက်သူ ဘာညာစွပ်စွဲတဲ့ အထဲမှာ ဘုရားရော ရဟန္တာကြီးတွေရော တယောက်မှ မလွတ်တော့ဘူး။ အဲဒီကတည်းက ခင်ဗျားတို့ လမ်းစဉ်ဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ပါ သူ့ကို ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ယုတ္တိမရှိတော့ဘူး။ ဒါကို ဘာလို့ ထပ်ပြောရတာလဲ ဆိုတော့ ဒီဟာက ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဝါဒလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒီဆောင်းပါးရဲ့ ဆိုလိုရင်းလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်တဲ့လူတွေပါ သတိထားမိအောင် ထပ်ပြောနေတာ။ နောက်ပြီး ခင်ဗျားပြောသလိုဆို ခင်ဗျားတို့ကို အယူဝါဒနဲ့ နှိပ်စက်ညှင်းဆဲချင်တာလည်း ပါတယ် ဟဲ ဟဲ။
ဆေးရိုးသည် ကန့်လန့်တစ်ချက်လောက်ဝင်ပါမယ်ဗျို့ ..
မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာရော မိုးပြာရော ဘယ်ဟာကိုမှ ဂဂနနမသိဘူးဗျ..
မွေးကတည်းက အဖေအမေက အစိန္တေယျ ၊ သြကာသ ချပေးခဲ့လို့သာ မှတ်ပုံတင်ထဲ
လော့ဂျစ်အရ မြင်မိသလောက် ၀င်ပြောချင်စိတ်တော်တော်ပေါက်လာလုိ့ပါ..
ဘာသာတရားတစ်ခုဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအမူအပြောအဆို အနေအထိုင်တွေကို
အဓိက ထိန်းကွပ်ပေးတဲ့ အခြေခံအကျဆုံးအရာတစ်ခု ဆိုတာကို လူအများစုလက်ခံကြပါတယ်..
အဲသလိုသာ လက်ခံကြမယ်ဆိုရင်တော့ အခုမိုးပြာဟာ တော်တော်အထင်ကြီးလောက်တယ်လို့
(ဦးဦးပါလေရာပြောသလို.. သူတို့ဟာသူတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံလိုင်းပူးပြီး ဘာသာဖြန့်တာ၊
ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံပြီး “ဘာသာထိ ဓါးကြည့်” တုန့်ပြန်ဆဲဆိုတတ်ကြတဲ့
လူတွေ နဲ့ လားလားမှ မအပ်ပဲ..
သူတို့ကို စွတ်စွဲပုတ်ခတ်နေတဲ့လူတွေ ကို သတိမကွာပဲ တုန့်ပြန်နိုင်ပုံတွေကို..
မိုးပြာကြောင့်သာ ဒီလို သတိမလွတ်တဲ့၊ တည်ငြိမ်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေရလာတယ်ဆိုလျှင်
မိုးပြာကို တော်တော်ပဲ လေးစားမိပါမယ်…
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မိုးပြာမဟုတ်သလို မိုးပြာဘယ်လိုပြာတယ်မသိတော့..
သူတို့ အယူဝါဒကို ထောက်ခံခြင်း၊ကန့်ကွက်ခြင်းလုံးဝမရှိပါ…
ကိုယ့်အတွက်ရော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါ ငြိမ်းချမ်းမှုရှိ၊ အကျိုးရှိစေတဲ့..
တော်တော့်ကို ပညာရစေတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကြီးဖြစ်စေအောင်ကို
ခင်ဗျား ဘယ်လောက်ပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကိုယ်ပျောက်ရွာသား ဆိုပြီးဆောင်းပါးတွေ ရေးရေး ကျုပ်က ခင်ဗျားကို သူကြီးမင်းရဲ့ ကိုယ်ပွားလေးလို့ တော်တော်ကို သံသယရှိတယ်။ ဘယ်တုန်းကတည်းက လည်းဆိုတော့ ကျုပ်ရေးတဲ့ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် (၁၈) တိုင်းရင်းသားအရေးသို့ ပြန်ကြားချက်ကတည်းကပဲ။ ကျုပ်ကတော့ ကျုပ်သံသယကို ပြောတာလေဗျာ။ ဟုတ် မဟုတ်ကတော့ ကာယကံရှင် နှစ်ယောက်ပဲ အသိဆုံးဖြစ်မှာပေါ့။ ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်မြင်တာတော့ ခင်ဗျားဟာ သူကြီးနာမည်နဲ့ လုပ်ဖို့မကောင်းတာတွေကို လိုက်လုပ်ပေးနေတယ်လို့ ထင်တယ်။
ထားပါ။ ခင်ဗျား မိုးပြာဆရာတွေ တည်ငြိမ်တာတော့ အမှန်ပဲဗျ။ ဘယ်လောက်တည်ငြိမ်သလဲဆိုတော့ သူတို့ဝါဒကို ယုံသလား မယုံသလားလို့ မေးတာကို တည်ငြိမ်စွာနဲ့ မဖြေလို့ နှစ်ခါလောက်ကို မနည်းမေးရတယ်။ စဉ်းစားကြည့်လေ သူတို့က ရှင်းပြမယ်ပြောလို့ ဟုတ်ပါပြီ ခင်ဗျားရှင်းမှာကို ခင်ဗျားယုံသလားဆိုတော့ ဟော တည်ငြိမ်စွာနဲ့ ဘာမှမပြောတော့ဘူး။ ကျုပ်တို့ လူတွေဘက်ကလည်း တည်ငြိမ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ဘာသာထိ ဓားကြည့်ဆိုပြီး မဆဲသေးပါဘူး။ ပြောတာကတော့ အခြေအတင် ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဒီလိုပဲ ပြောရမှာပေါ့ဗျ။ ကျုပ်လဲ သူတို့ကို မဆဲပါဘူး။
နောက်ပြီး ကျုပ်ပြောတဲ့ ဦးညာန တပည့်တွေက ကြောက်သလား ရွံ့သလား ဘာလား ညာလားဆိုတာတွေကတော့ ဘာသာထိလို့ထက် တမင်ကို ကလိပြီးပြောတာပါ။ လက်ဝှေ့ပွဲမှာ ပြိုင်ဘက်လက်ဝှေ့ သမားကို ပြောင်ပြတဲ့ သဘောမျိုး လုပ်တာပါ။ နောက်ပြီး ခင်ဗျားက လောဂျစ်သဘောမျိုး ပြောလို့ ကျုပ်ကလည်း အဲဒီသဘောနဲ့ပဲ ပြန်ပြောမယ်။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲက ပညာရတယ်ဆိုရင် ကျုပ်တော့ သိပ်မကြိုက်ဖူးဗျ။ တခြားလူတွေ ပြောတာ ကျုပ်မသိပေမဲ့ ကျုပ်ပြောတာကတော့ ပညာပေးဖို့ထက် ဒီဝါဒရဲ့ ရှေ့နောက်မညီတာကို ပြပြီး ချေဖျက်ချင်လို့ပဲ။ ခင်ဗျား ဒီလူရဲ့ ဆောင်းပါးကိုလည်း ပြန်ကြည့်အုံး။ ဆောင်းပါးက တိုတိုလေး။ ဘာမှလည်း ပညာပါတာ သိပ်မတွေ့ဘူး။ အမှန်တော့ ကျုပ်က ဒါမျိုးကို သိပ်မဆွေးနွေးချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သဂျီးက ကျုပ်နာမည်ကို ရွတ်ပြီး လျှာကြီးတတောင်လောက် ထွက်လာလို့ပါ။
ခင်ဗျားရဲ့ အမွှာအကိုလား ညီလားကိုတော့ ကျုပ် request လုပ်ထားရအုံးမယ်။ ကျုပ်က ဘယ်ဟာက အဓိကလည်း သာမညလည်းဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ ခွဲထားပြီးသားပါ။
အခု ထပ်ပြောရအုံးမယ်။ မိုးပြာဂိုဏ်းရဲ့ ဒီဝါဒဟာ ခင်ဗျားပြောတဲ့ လောဂျစ်နည်းအရ လုံးဝကို မြောင်းထဲလွှင့်ပစ်သင့်တဲ့ ဝါဒပဲ။ သူတို့ပြောတော့ ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညိုတယ်တဲ့ သူတို့ဝါဒကျတော့ သေသေချာချာကြီးကို အပြစ်တင်နေတယ်။ သေချာတယ် ဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းက ညနေတိုင်း ဘုရားကျောင်းတော်ကို သွားတဲ့အရိယာတွေလဲ သူတို့ ဥပမာအရ ဆေးပေါ့လိပ် သောက်တဲ့လူတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဆေးပေါ့လိပ်ပမာပြောပြော အချိုမှုန့်ပမာပြောပြော အနာဂျက်ဆင်ဆေးဝါးပမာပြောပြော ငရုတ်သီးမှုန့်ပမာပြောပြော ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညိုတယ်ဆိုရင် ဒီဝါဒကို လွှင့်ပစ်လိုက်တော့ မြောင်းထဲကို။ ဒီဝါဒကို ယုံကြည်ရင်လည်း ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ နာမည်ကို မရွတ်နဲ့တော့။ အခုမှ လွှင့်ပစ်လို့တော့ မရတော့ပါဘူး။ ခင်ဗျားရဲ့ အမွှာညီအကို ပြောသလို သမိုင်းကျန်ရစ်ပါပြီ။
သူကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကို မှားတဲ့ကိစ္စကတော့ တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျို့ ..
ကျွန်တော်က စာရေးစာဖတ်နဲလို့ ဒီကွန်းမန့်တွေတောင် စကားလုံးအထားအသိုကို
နောက်ပြီး ဘာသာထိ ဓါးကြည့် လို့ ဆိုတာကလဲ ဒီပို့စ်တစ်ခုအတွက်ပဲ ဆိုတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ..
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရက ဘယ်လောက်ပဲ ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖော်ဆောင်စေတဲ့ တရားဖြစ်ပါစေ..
ဟိုနိုင်ငံက မြတ်စွာဘုရားပုံကိုကိုဘယ်မှာ ရိုက်လို့ဆိုပြီး ဆဲကြလားဆဲရဲ့..
ဒီနိုင်ငံက ဘုရားဆင်းတုတော်ပေါ် တက်ကကြလို့ ဆဲကြလားဆဲရဲ့..
“It’s not matter between God and Us”
“It’s just matter between God and Me” လို့ပဲ ယူဆထားပါတယ်..
ဒီနေရာမှာ God ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ မြတ်စွာဘုရားဂေါတမ လို့ပဲ မှတ်ပေးပါနော..
စော်ကားတဲ့လူတွေဟာ ‘သူ့ခံယူချက်နဲ့သူ’ သူ့လမ်းသူသွားပါလိမ့်မယ်..
ဘာသာတရားရဲ့ အကြမ်းထည် ငြိမ်းချမ်းမှုအကြောင်းကို
ကျွန်တော်တော့ သဘောပေါက်သလိုလို ရှိထားတဲ့အတွက်
အဲဒီလို ရုပ်ဝထ္ထုပစ္စည်းတွေအပေါ် သူတို့တွေ
ဘယ်လိုစော်ကား စော်ကား ဒေါသထွက်လုိ့မရဘူးဗျ
ကျွန်တော်တော့ ဒီပို့စ်ထဲ ဒီလောက်နဲ့ပဲတော်ပြီဗျို့ …
ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ ကျုပ်ကလဲ ကျုပ်သံသယကိုပဲ ပြောတာပါ။ ပြောခဲ့ပါသော်ကော ကျုပ်မှားနိုင်ပါတယ်လို့။ စာလုံးပေါင်းကတော့ တမင်မှားရိုက်လည်း ရတာပဲဗျ။ ခင်ဗျား အရေးနည်းပေမယ့် ကျုပ်အသိစိတ်အရ ခင်ဗျားဟာ ပေါ့သေးသေးလူ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ပေါ့ကြီးကြီးထဲက တယောက်ပဲ။
ခင်ဗျား တော်ပါပြီ ဆိုပေမယ့် ကျုပ်ကတော့ ပြောလက်စနဲ့ တခါတည်း ပြောရဦးမယ်။ ဗုဒ္ဓဝါဒဟာ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖော်ဆောင်တဲ့ သဘာဝပေမယ့် ဘုရားရှင်တောင် မမှန်တာတွေကို သည်းခံဆိုပြီး လွှတ်ပေးမထားဘူးဗျ။ ဒါကြောင့်လည်း ဗုဒ္ဓရဲ့ ဝါဒစစ်ပွဲများဆိုပြီး ပေါ်လာတာပဲ။ လူသာမန်တွေ ကတော့ ပိုဆိုးသေးတာပေါ့။
ဒီကိစ္စကတော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်လိုက်အုံးမယ်။ တော်ကြာ ဂေါတမဗုဒ္ဓများ သည်းခံဆိုပြီး တခါမှ အရှုံးမပေးဘူးတွေ ဘာတွေပြောပြီး အချောက်တိုက် ငရဲရနေအုံးမယ်။
ခင်ဗျားရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ် ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားကို ကျုပ်သိပ်သဘောမကျဘူး လို့ထင်တယ်။ ခင်ဗျားဟာ မူမမှန်ဘူး။ ပါစင်နယ် တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။ သတိထားမိတာ ကြာပြီ။ ဥပမာ ခင်ဗျားအနေနဲ့ ဒါပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ်မိုးပြာဆောင်းပါးကို ကွန်မန့်ပေးတာလို့ ထင်တယ်။ သိပ်တော့ မသေချာဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ဒါခင်ဗျားကို ဒီမိုးပြာပို့စ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဖူးခြင်းလို့ထင်တယ်။ ခင်ဗျားပေါ်လာရတော့မှာပေါ့။ ကျုပ်စိတ်ထင် မိုးပြာတွေက ဒီတပွဲမှာ နည်းနည်းနာနေပြီ။ ဒါပေမယ့် အရင်တုန်းကတော့ သူတို့က ထေရဝါဒကို စတင်ဝေဖန်တာပဲ။ မင်းကွန်း ဆရာတော်ကြီးနဲ့ မဟာစည် ဆရာတော်ကြီးက နာမည်ကြီးချင်လို့ သံဂါယနာတင်တယ် ဆိုတာကအစ ဝိပဿနာရိပ်သာတွေ အလည် ဘုရားရဲ့ တန်ခိုးတော်အဆုံး ဘာမှကို မကျန်ဘူး။ နောက်ပြီး ဒီလူတွေက စတာနဲ့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ပါဠိစာတွေ တသီကြီး ရွတ်လိုက်တော့ တော်တော့်လူက ကြောက်ပြီး မပြောဝံ့တော့ဘူး။ အမှန်မှာ ခင်ဗျားမှာ မျှတတဲ့ သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒီကတည်းက အို မိုးပြာဆရာတွေကလဲ ဒီလို မပြောရဘူးလေ ဘာညာနဲ့ တားသင့်တာပေါ့။ ဗုဒ္ဓရဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့တရားတွေ ဘာတွေ သူတို့ကို ပြောသင့်တာပေါ့။
အခုမှ မိုးပြာဆရာတွေလဲ စပြီးအထိနာနေရော ခင်ဗျားက ကျနော်ကိုယ်ပျောက်ရွာသား ဆိုပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးတရား ဟောတော့တာပဲ။ ကျနော့်တုန်းကလဲ ဒီလိုပဲ။ ခင်ဗျားကို ကျနော် ပထမဆုံး စတွေ့တာ ကျနော်ရေးတဲ့ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် (၁၈) တိုင်းရင်းသားအရေးသို့ ပြန်ကြားချက်မှာပဲ။ အဲဒီတုန်းက ကျုပ်က ခင်ဗျားတို့ အဘဖောလို့ ခေါ်တဲ့ Foreign residence ကိုရေရေလည်လည် ဝေဖန်နေတာ။ သူလဲ တော်တော့်ကို အထိနာနေပြီ။ ဒါပေမယ့် စတာကတော့ သူကစပြီး ကျုပ်နာမည်ကို ဆောင်းပါးထဲမှာ ရေးပြီး အားလုံးနဲ့ ရန်တိုက်ပေးတာ။ ကျုပ်က အဲဒီတုန်းက ရေးခါစလေး ကျုပ်သာ သိပ်အားမကောင်းရင် အားလုံးဝိုင်းဆဲတာကို ခံရတော့မှာ။
ကျုပ်ကောင်းကောင်း မှတ်မိပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကဆို တချို့က ကျုပ်ကိုလာပြီး အမယ် ရာဇဝင် ၇ ကျမ်း ကျမ်းတော်ကြီးဆိုလား ဝေဖန်ပြပါတွေ ဘာတွေတောင် ပါသေးတယ်။ အဲဒီလူလဲ ကျုပ်က ခင်ဗျားပြောတဲ့ ရာဇဝင် ၇ ကျမ်း ကျမ်းတော်ကြီး ကျုပ်မဖတ်ဖူးလို့ ခင်ဗျားပဲ ဝေဖန်ပါလို့ ပြောလိုက်တော့ မိုးပြာဆရာတွေလိုပဲ ပေါ်ကိုမလာတော့ဘူး။
ထားပါ အဲဒီတုန်းက ကျုပ်က ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အဘဖောကို ဝေဖန်လို့ သူတော်တော် နာနေမှ ခင်ဗျားက ကိုယ်ပျောက်ရွာသားဆိုပြီး ပေါ်လာပြီး ကျုပ်ကို တောင်းပန်တော့တာပဲ။ အမှန်မှာ ခင်ဗျားမှာ မျှတတဲ့ အမြင်ရှိမယ်ဆိုရင် ဦး FR က ကျုပ်ကို ဝေဖန်ကတည်းက ခင်ဗျားက ကန့်ကွက်ရမှာ။ အဲဒီတုန်းက တူးဖော်ကြ ဆွေးနွေးကြ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ ဆိုပြီး ကတဲ့လူတွေတောင် ရှိသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဆောင်းပါးကို ပါစင်နယ်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ ထင်တဲ့လူက အချိန်မရွေး မေးနိုင်တယ်။ ကျုပ် ခင်ဗျားတို့ကို တခါထဲ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နဲ့ ပါစင်နယ် ခွဲပြလိုက်အုံးမယ်။
နောက်ပြီး ဒါကိုကျုပ်က ပြန်ပြောနေတာ ဘာမှ ဒေါသထွက်လို့ မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်စဉ်ကို ပြောပြနေတာ။ ပို့စ်နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဆရာ နောက်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးတရား ဟောရင် နှစ်ဘက်စလုံးကို မျှမျှတတဟောပါနော်။ အဲဒါလေး ပြောထားချင်ပါတယ်နော့(သူကြီးလေသံဖြင့်)။ ကိုယ့်လူတွေက ပြောနေတုန်းကတော့ ငြိမ်နေပြီး ကိုယ့်လူတွေ ခံရမှ မေတ္တာပို့ပါတို့ သစ္စာမေတ္တာရွှေမန်းသဘင်တို့ လျှောက်မအော်ပါနဲ့။
ပြောလက်စနဲ့ ပြောအုံးမယ်။ ဒီမိုးပြာဆရာတွေလဲ သူများကို ဝေဖန်တုန်းကတော့ အမယ် ပြုံးပြုံးနဲ့ ပြီးတော့ သူတို့ဝါဒကျတော့ ရှေ့စကားနဲ့ နောက်စကားတွေက အကုန်လုံး သောက်တလွဲချည်းပဲ။ နောက်တခါ ဒီထက် နာလိမ့်မယ် ထင်တယ်။
အထက်ပါ သူကြီးရဲ့ commet အရ….ပါးစပ်နဲ့ အလွတ်ဆိုနိုင်တယ်…မျက်စိမိတ် တင်ပလ္လင်ခွေ ဖေါင်းပိန်၊ လေ၀င်လေထွက် လုပ်တတ်ရုံနဲ့ တရားသိပြီလို့ မထင်နဲ့ လို့သူကြီးပြောတာ ..
အခုတော့…ကိုစံလှကြီးကကဲ..ကျုပ်အမေက ကျုပ်ကို ကိုယ်ဝန်ရှိကတည်းက ကလေးအတွက်ပါ ရည်စူးပြီး သရဏဂုံကို ယူခဲ့တာတဲ့။တကယ်တော့ ကျုပ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာ အမိဝမ်းတွင်းကတည်းက လို့ပြောရင်တောင် မမှားဘူး။
ဘုရားလက်လက်ထက်ကတော့…သူရဲ့ တရားကိုသဘောပေါက်ပြီးမှ….သူတပည့် အဖြစ်ခံယူတာ..
အခုတော့ ဆရာသင်ပေးတဲ့ လက်သမား အတတ်ပညာတောင်မသင်ရသေးဘူး…လူကလည်း မွေးတောင်မမွေးသေးဘဲနဲ့ ဘယ်လိုလုပ် တတ်မလဲ?
မူရင်းဟမ်ဘာကာဆိုင်လို အရသာမျိုး မချက်တတ်သေးဘဲနဲ့ ဆိုင်ခွဲနာမည် အဖြစ်လုပ်ရင်တော့…မူရင်း ဆိုင်နာမည်ပျက်တာပေါ့…..
ကဲ ko out of ရေ
ခင်ဗျားတိုနဲ့ သဂျီးနဲ့ကတော့ တော်တော့်ကို understanding ရှိတာပဲနော်။ ဂိုဏ်းတူ ညီအကိုတွေ ကျနေတာပဲ။ ထားပါ။ ဟုတ်ပါပြီ ခင်ဗျားပြောသလို ရှုမှတ်ရုံနဲ့ တရားသိတယ် မထင်နဲ့ဆိုလို့ မထင်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားတို့ကကော ဘယ်လို တရားကို သိတာလဲ။ ဦးဥာဏရဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်ပြီး သိတာလား။ လင်းစမ်းပါဦး။
ခင်ဗျား ကျုပ်ပြောတဲ့ ကွန်မန့်ကို သေသေချာချာ ပြန်ကြည့်ပါအုံး။ ကျုပ် ရေးထားတာ အခုနောက်ပိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်တာတော့ ကျုပ်အသိစိတ်နဲ့ ကျုပ်ပဲ။ မိဘဘိုးဘွားက ကျုပ်ကို မတားနိုင်တော့ဘူးလို့ ရေးထားပါတယ်။ ပထမ ပြောတဲ့ မိခင်ကိုယ်ဝန်ကတည်းက စပြီးစကားပြောတတ်ကထဲက ဆိုတာက ကျုပ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာကို ဂုဏ်ယူပြီး ပြောတာလေဗျာ။ ကျုပ်ပြောပါတယ် ခင်ဗျားတို့ နားမလည်ပါဘူးလို့။ ဘယ်အရွယ်က စသလဲ ဆိုရင်တော့ ကျုပ်တောင် မပြောနိုင်တော့ဘူး။ ဟုတ်တယ် မပြောနိုင်တော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျုပ်က စပြီးစကားပြောတတ်ကတည်းက အဲဒီထဲကို ရောက်နေပြီ။ နောက်ပြီး ဘယ်အရွယ်က စပြီးယုံကြည်သလဲ ဆိုတာလဲ ဘယ်လိုမှ ပြောလို့မရတော့ဘူး။
ခင်ဗျားတို့က ရေးကူးသင်နည်း ဥပမာကိုကြိုက်တယ် ဆိုလို့ အဲဒီလို ပြောကြည့်မယ်။ ရေးကူးသင်တော့ တဖြည်းဖြည်း ယက်ရင်း ကူးရင်းနဲ့ပဲ အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပြီး တတ်လာရော။ နောက်ပိုင်း အဲဒီလူကို ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက် ဘယ်နာရီတုန်းက ကူးတတ်သွားတာလဲ ဆိုရင်သူလဲ မပြောတတ်တော့သလိုပဲ။ ယုံကြည်မှုက ကျုပ်တို့အတွက်တော့ တဖြည်းဖြည်းချင်း သွားတာလေ။ ခင်ဗျားတို့ ကျတော့ မတူတော့ဘူးဗျ။ ခင်ဗျားတို့ မိုးပြာဝါဒပေါ်တာ သိပ်မကြာသေးဘူး။ မျိုးဆက်နှစ်ခုစာ မရှိသေးဘူး။ ဆိုလိုတာက မိုးပြာဒယ်ဒီနဲ့ မိုးပြာမာမီကမွေးတဲ့ မိုးပြာပူတူးတူးလေးဆိုပြီး လုပ်လို့မရသေးဘူး။ ဟာ ကျုပ်က ၉ တန်းလောက်ကျမှ မိုးပြာဝါဒကြီးကို တွေ့ပြီး မိုးပြာဆရာ ဖြစ်သွားတာလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်တို့ကတော့ မွေးကတည်းကလို့ ပြောရင်လည်း မမှားဘူးဗျ။ ကဲပါ ခင်ဗျား ဘာပြောချင်နေတာလဲ။ နောက်ပြီး မိဘဘိုးဘွား ယုံကြည်သဖြင့် ဘာညာနဲ့ ကာလာမသုတ်ကို ရွတ်ဖို့ တွေးနေသလား။ ကျုပ်အခု ပြောနေတာတွေက မိဘဘိုးဘွား ယုံကြည်မှုထက် ခင်ဗျားတို့ကို ကျုပ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့ လောဂျစ်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ ဝါဒဟာ အဓိပ္ပါယ် မရှိဘူးလို့ ပြောနေတာ။
ပြောစရာရှိ မြန်မြန်ပြော ကိုယ့်ဆရာ။ ကျနော် နောက်တရက်လောက် ကျရင် ခရီးထွက်စရာ ရှိတယ်။ ၁၀ရက်လောက်ကြာမယ် အဲဒီနေရာမှာ အင်တာနက် မရှိဘူးပြောတယ်။ ခင်ဗျား ပြောစရာရှိရင် နည်းနည်းစုထားပါလား။ ခင်ဗျားပို့စ်က နည်းနည်းကြာနေပြီ။ စကတည်းကလဲ ဘာမှ မပြောဘူး။ ကျုပ်က အိညောင် အိညောင်လုပ်တဲ့ လူတွေကို သိပ်သဘောမကျဘူး။ အထူးသဖြင့် ယောကျာင်္းလေးတွေပေါ့။ မိန်းကလေးတွေကျတော့ နွဲ့တာလို့ ခေါ်တယ်။ ချစ်စရာကောင်းတယ်။
ကျနော်ပို့စ်တင်ရင်မရှိတော့ဘူးပေါ့  ။
နာတာဘဲ ။ စောင့်နေမယ် မြန်မြန်ပြန်လာပါဗျို့  …….။
ကျနော် နောက်နေ့ ခရီးထွက်ရအုံးမယ်ဗျ။ အဲဒီနေရာက အင်တာနက် မရှိဘူးပြောတယ်။ ကျုပ်လဲ အလကားနေရင်းနဲ့ကို ရွှေမေတ္တာတွေဆိုပြီး မေတ္တာပို့တဲ့လူတွေဆီက မေတ္တာတွေကြောင့် ကျန်းမာ ချမ်းသာကြောင်းပါ ဟဲ ဟဲ။
ဝင်ပြီးကော်မန့်ပေးချင်ပေမယ့် ဖုန်းနဲ့က အဆင်မပြေဘူးဗျ။
ဒီပို(စ့်)ကို ခဏခဏဝင်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။Ko out of ဆိုတဲ့သူ၊မောင်ဂွဆိုတဲ့သူတွေ
တော်တော်အရှက်မရှိတာပဲ။သူတို့ကို တစ်ကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တွေလားလို့ ကိုစံလှကြီးမေးကြည့်ပါဦး။
အရင် post တွေတုန်းက ကျွန်တော်မေးခဲ့ဖူးတယ်ထင်တာပဲ။ယောင်ဝါးဝါး အူကြောင်ကြားဖြေပါလိမ့်မယ်။
ခင်ဗျားရေးမယ့် ဆောင်းပါးမှာလဲ ကျွန်တော့ကိုထည့်သုံးပါဗျာ။